မျိုးပပစန်း – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Wed, 18 Nov 2020 04:18:47 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.3.6 ငတ်နေတော့ ပိုးကူးမှာလည်း မကြောက်တော့ပါဘူး https://burma.irrawaddy.com/article/2020/11/18/233523.html Wed, 18 Nov 2020 04:18:47 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=233523
ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း ရိုက်ခက်မှုကြောင့် အခြေခံ လူတန်းစားများအနေဖြင့် အဆောင်လခ မပေးနိုင်ခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး ပြဿနာများနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဒဏ်ကို ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်နှင့်အတူ ကြီးမားစွာ ရင်ဆိုင်နေရသည်။
The post ငတ်နေတော့ ပိုးကူးမှာလည်း မကြောက်တော့ပါဘူး appeared first on ဧရာဝတီ.
ကမာ္ဘ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်နှင့် စားဝတ်နေရေးကြားတွင် ပိတ်မိနေသောသူ အများစုမှာ အခြေခံ လူတန်းစားများ ဖြစ်သည်။ ထိုသူများမှာ ကိုဗစ်ကို ကြောက်နေ၍မရသေးပေ။ ဝမ်းရေးအပူက ကိုဗစ်ထက်ကို ပို၍ ကြောက်နေရသည့်သူများကို ရန်ကုန်မြို့ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်တချို့တွင် မြင်တွေ့နိုင်ပေသည်။
COVID-19 ဒုထိယ လှိုင်းရိုက်ခတ်မှုက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ စတင်ပြီး မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးသို့ ကူးစက်လျက်ရှိရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှလုံးသားမြို့တော်ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့သည် ယနေ့ အချိန်ထိ COVID-19 ရောဂါကို အပြင်းအထန် ခံစားရလျက် ရှိနေသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်းနှင့် သေဆုံးနှုန်းများ မြင့်တက်လာနေသောကြောင့် အစိုးရက Stay at Home နေထိုင်ရန် စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးပတ်မှ စတင်ပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မှာ တလကျော် ကြာမြင့်လာပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အကန့်အသတ် အခြေအနေများက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအပေါ် များစွာ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရာ ရန်ကုန်မြို့၏ ဆင် ခြေဖုံး မြို့နယ်များရှိ လက်လုပ်လက်စား ပြည်သူများ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ လုပ်သားများမှာ ကျန်းမာ ရေး အန္တရာယ်၏ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းအပြင် နောက်ဆက်တွဲ စားဝတ်နေရေး ပြဿနာများကြောင့် အကြပ်အတည်းများကို နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ပထမလှိုင်းတွင် လူတန်းစား အလွှာမျိုးစုံက အလုပ်သမား သောင်းနှင့်ချီ၍ အလုပ်လက်မဲ့များ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသော ဒုတိယလှိုင်းတွင်လည်း အလုပ်လက်မဲ့ အရေအတွက်မှာ အလွန်ပင် များပြားလာသည့်အပြင် စားဝတ်နေ ရေး ပြဿနာများနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုကလည်း ပို၍ မြင့်မားလာခဲ့သည်။
ကပ်ရောဂါ ဒုတိယလှိုင်း၏ ရိုက်ခတ်မှု အရှိန်က ဆက်လက် မြင့်မားနေဆဲ ဖြစ်တာကြောင့် အောက်ခြေ လူတန်းများတွင် ဝင်ငွေများ လျော့ကျကာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဒဏ်ကို ခါးစည်း ခံစားနေကြရသည်။
ပျံကျ အလုပ်သမား ဒေါ်သန်းရီက “ကျမ အလုပ်မျိုးစုံ လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် စုမိတယ်လို့ကို မရှိဘူး။ ကလေးကလည်း ၈ လ သားလေး ဖြစ်တော့ သူ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေက များတယ်။ အခု အလုပ်တွေက ပိတ်၊ ဈေးတွေ ပိတ်တော့ ဈေးမှာ သူများပစ်ထားတဲ့ အမှိုက်ကနေ စားစရာ ရှာစားနေရတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်စိမ်း လက်ကားဈေးကြီးဖြစ်သော သိရိမင်္ဂလာဈေးရှိ အမှိုက်ပုံးအတွင်းမှ စားစရာများ ရှာရင်း ပြောပြရှာသည်။
အမှိုက်ပုံးမှ ရရှိလာသော စားသောက်ရန် အဆင်ပြေသည့် စားစရာ တချို့ကို ပြုတ်စားခြင်း၊ အစိမ်းစားခြင်းတို့ဖြင့် ဝမ်းရေး အတွက် ဖြေရှင်းနေရပုံကို သူမက ပြောပြသည်။
“ထမင်းမစားရတာ ၁၀ ရက် ကျော်နေပြီဆိုတော့ တွေ့တာ စားတာပဲ။ ပညာမတတ်တော့ အလုပ်ကြမ်းပဲ လုပ်ရတာပေါ့။ ပထမတော့ ပန်းရံပေါ့။ အဲဒီ အလုပ် မရှိရင် ပလက်စတစ် ကောက်တယ်။ ပန်းရောင်းတယ်။ ဈေးတွေမှာ ပစ္စည်းသယ်ပေး တယ်။ အရပ်ထဲမှာ ဆိုရင်လည်း သူများ ခိုင်းတာ လုပ်ပေးတယ်။ သူတို့က အဝတ်အစားတို့ စားစရာတို့ ပေးတယ်လေ။ ကျမအနေနဲ့က အလုပ်လိုချင်တာ အဓိကပါပဲ” ဟု သူမက လက်ရှိ အခြေအနေကို ပြောပြသည်။
ဒေါ်သန်းရီတို့ သားအမိမှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အလယ်ရွာအနီးရှိ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်၌ ၁ လလျှင် ငွေကျပ် ၅ ထောင်နှင့် အိမ်ငှား နေထိုင်ကြသည့် မိသားစုဖြစ်ပြီး ကျူးကျော် ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့် အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေး လည်း တကြိမ် တခါမှ မရရှိခဲ့ပေ။
နို့စို့အရွယ် ကလေးကို နို့တိုက်ရန်ပင် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းရီမှာ အစာအဟာရ မလုံလောက်သဖြင့် ယခု အချိန်တွင် နို့ ချောင်း ပိတ်ကာ နို့မထွက်သောကြောင့် အများသူငှာပေးသည့် နို့ဆီချောင်းလေးများနှင့် ချွေတာကာ ကလေးအသက် ဆက်ပေးနေရကြောင်း သိရသည်။
“ကျမတို့က ကျူးကျော်ကိုမှ ငှားနေရတာ။ ဒါပေမယ့် အခု ရက်ပိုင်း လှူတဲ့သူတွေလာတော့ ကျမတော်တော်လေး ဝမ်းသာ ရတယ်။ ငတ်နေတော့ ပိုးကူးမှာလည်း မကြောက်တော့ပါဘူး။ လက်အိတ် မပြောနဲ့ နှာခေါင်းစည်းတောင် မဝယ်နိုင်ဘူး။ အလကား ဝေတာလေး တခု ရထားလို့ တပ်နေတာ။ ကျမကတော့ အလုပ်တွေ ထပ်ပိတ်မှာ ကြောက်တယ်” ဟု ဒေါ်သန်း ရီက စိုးရိမ်စွာ ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့က တွေ့ရသည့် လှိုင်သာယာမှ ကျူးကျော်နေထိုင်သူများ/အောင်ကျော်ထက်/ဧရာဝတီ
ဒေါ်သန်းရီတို့ မိသားစုကဲ့သို့ပင် ရန်ကုန်မြို့၏ ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်များ ဖြစ်သော လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း အစရှိသည့် နေရာများတွင် နေထိုင်သည့် အခြေခံ လူတန်းစားများ၏ ဘဝမှာ ကပ်ရောဂါထက် ယင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများက သာ၍ပင် ခါးသီးလှပေသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ အတွင်းကလည်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ လက်လုပ်လက်စား ဖခင်တဦးက ကလေး နို့မှုန့်ဖိုးအတွက်ကို မရှာဖွေနိုင်တော့သဖြင့် ဘဝကို အရှုံးပေးကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်ခဲ့သည်အထိ ဖြစ် ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များလည်း ရှိခဲ့သည်။
ထိုသို့ပင် အခြားဘဝများမှာလည်း ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားရရန်အတွက် ခက်ခဲလှစွာ ရုန်းကန်နေကြရဆဲ ဖြစ်သသည်။
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အမှတ်လေး လမ်းမဘေး ဆယ်အိမ်တန်းတွင် နေထိုင်သူ ဒေါ်တင်တင်က “ကျမတို့က မိသားစုဝင် ခြောက်ယောက် ရှိတယ်။ အလုပ်တွေ နားထားတော့ ပြန်လုပ်ရတာ အခု တယောက်က ၃ ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ နောက်ဖေး မှာ ပုလင်းဆေးနေတာ တရက်ကို ကျပ် ၅ ထောင်တော့ ရတယ်။ အရင်ကတော့ အုတ်ကား လိုက်တယ်။ ကြုံရာလုပ်တာ ပေါ့။ ရောဂါထက် တနေ့လုပ်မှ တနေ့စား ဆိုတော့ စားဖို့ အရင် ဖြေရှင်းနေရတယ်” ဟု ၎င်းတို့၏ အခြေအနေကို ပြောပြ သည်။
အလုပ်မရှိသည့် နေ့ရက်များ၌ ဒေါ်တင်တင်တို့ မိသားစုသည် ထမင်း တနပ်စာ မိသားစု ခြောက်ယောက်အတွက် ဆန် ၄ ဗူး ချက်ရမည့် နေရာတွင် ဆန်သုံးဗူးခန့် မျှတပြီး ချက်စားကာ မငတ်ရုံတမယ် ဖြေရှင်းနေရသည့် အခြေအနေ ဖြစ်နေ ကြောင်း သူမက ပြောပြသည်။
ဒေါ်တင်တင်တို့လို အခြေအခံ လက်လုပ်လက်စားများက ယခုလို မိုးလေကင်းလွတ်သည့် သီတင်းကျွတ်ကာလသို့ ရောက် လျှင် သူတို့အတွက် အလုပ်များ လှိုင်လှိုင်ပေါသည့်အချိန်၊ လက်ထဲ ငွေရွှင်သော ကာလ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ယခုနှစ်တွင်မူကား ကိုဗစ်၏ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် စားဖို့ပင် အနိုင်နိုင် ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေရသည်။
“အခုက အလုပ်မရှိတဲ့နေ့က များတယ်။ အရင်ကတော့ ကျမက အုတ်ကား လိုက်တယ်။ အလုပ် ရပ်လိုက်ရတာ ၁ လ ကျော်လောက် ရှိပြီ။ စားဝတ်နေရေးကတော့ အရင် အလုပ်ရှိတုန်းက ကျန်တာလေးနဲ့ ပရိတအဖွဲ့တွေက လာလှူတာလေးနဲ့ စားဖို့အတွက် ဖြေရှင်းနေရတယ်။ ရှေ့ကို ကြာရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ မသိဘူး” ဟု ကျပန်း အလုပ်သမား မမြင့်မြင့်ခင် က ညည်းငြူ ပြောဆိုသည်။
ယခင်က အိမ်စရိတ် ကျပ် ၅ ထောင် အသုံးပြုပါက ယခုအချိန် ထက်ဝက်ခန့်သာ အသုံးပြုသည်အထိ ချွေတာနေသဖြင့် ကိုဗစ်ဒဏ်ကြောင့် အောက်ခြေ လူတန်းများမှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံစားနေရသည်။
ဆယ်အိမ်တန်း ရပ်ကွက်သည် တနေ့လုပ်တနေ့စား အခြေခံ လူတန်းစား အများစု နေထိုင်ရာနေရာ ဖြစ်သောကြောင့် လည်း အိမ်တအိမ်နှင့်တအိမ်မှာ ထိစပ်ကာ ဓနိမိုး ထရံကာ၊ ဝါးလုံးတိုင်ထောင်သည့် အိမ်လေးများ အစီအရီ ကပ်နေခြင်း က ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါကို ဖိတ်ခေါ်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။
ထိုသို့ ရောဂါ၏ အန္တရာယ်က နီးကပ်နေသော်လည်း ထိုနေရာတွင် နေထိုင်သည့်သူများမှာ ကျန်းမာရေးထက် မနက်ဖြန် အတွက် စားသောက်ရေးကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမည်လည်း ဆိုသည့် အချက်က သူတို့အတွက် အရေးကြီးလျက် ရှိနေသည်။
ကိုဗစ်ကပ် ရောဂါ ပထမလှိုင်း စတင်သည့် ဧပြီလကုန်မှ စ၍ အစိုးရက ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား အစရှိသည့် အခြေခံ စားသောက်ကုန် ၅ မျိုးကို ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီး၊ ဒုတိယအကြိမ်တွင် အိမ်ထောင်စု ၁ စုလျှင် ငွေကျပ်၂ သောင်းနှုန်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမှာ သုံးကြိမ်မြောက် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
သို့သော် မြေပြင်တွင် အစိုးရ ပေးနေသော ထောက်ပံ့ကြေးများကို တချို့ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်များတွင် ငွေကျပ်၂ သောင်း အပြည့်အဝ မရခြင်း၊ ပေးပြီးသား အိမ်ထောင်စုများ ထပ်မံ ရရှိခြင်းနှင့် ငွေကြေး တတ်နိုင်သည့် မိသားစုများ ရရှိခြင်းများ ရှိနေခြင်း တို့ကြောင့် အစိုးရက ပေးသော်လည်း အငြင်းပွားမှုများ ရှိနေသည်။
ဆယ်အိမ်တန်းတွင် နေထိုင်သူ ဒေါ်တင်တင်တို့ပင် ကျပ် ၁၃၀၀၀ နှစ်ကြိမ်နှင့် ကျပ် ၁၃၅၀၀ တကြိမ်သာ ရရှိကြောင်း ၎င်း တို့က ပြောသည်။
ကျူးကျော် ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူများကတော့ အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေးကို ခံစားခွင့် မရပေ။
ထို့ကြောင့် ယခု ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းတွင် စက်တင်ဘာလမှစ၍ လုပ်ငန်း အများအပြား ရပ်နားခဲ့ရခြင်းက အခြေခံ လူတန်း စားများအတွက် ဝင်ငွေများ ထိခိုက် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေချိန်တွင် အလှူရှင်များနှင့် အစိုးရ၏ ထောက်ပံ့မှုကို မျှော်လင့် နေကြသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အစိုးရ အနေနှင့် အခြေခံ လူတန်းစားများ ထောက်ပံ့ရေးထက် ကိုဗစ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း ရိုက်ခက်မှုကြောင့် အခြေခံ လူတန်းစားများ အနေဖြင့် အဆောင်လခ မပေးနိုင်ခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး ပြ ဿနာများနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဒဏ်ကို ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်နှင့်အတူ ကြီးမားစွာ ရင်ဆိုင်နေရသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ် COVID-19 ပြန်ကြားရေး ကော်မတီ တာဝန်ခံ ကိုဇေကိုကိုက “ကျနော်တို့ မြောက်ပိုင်းခရိုင်က အထိ အနာဆုံးဖြစ်တာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ လူဦးရေက အရမ်းများတယ်။ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားတွေ အရမ်းများတယ်။ နေ့ စား အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြဿနာက အဆောင်လခ ပြဿနာတွေ စားဝတ်နေရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ် တယ်။ ကျနော်တို့ ကွာရန်တင်း စင်တာမှာ ဆိုရင် စက်ရုံလုပ်သားတွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားတွေ အများဆုံး ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောပြသည်။
စင်တာသို့ ရောက်ရှိလာသည့် သူများက အနံ့ပျောက်သည့် စက်ရုံလုပ်သား အများစု ဖြစ်ပြီး တရက်လျှင် အနံ့ပျောက် စက်ရုံ လုပ်သား ၄၀ အထိ ရှိကာ တပတ်လျှင် လူဦးရေ ၃၀၀ ဝန်းကျင် အထိ ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“အဲဒီလူတွေကို စစ်တဲ့အခါ အမြဲတမ်း ၃၀၀ ဆိုရင် လူ ၁၅၀ လောက်က Positive ပဲ။ အဲဒီတော့ အခြေခံ လူတန်းစားတွေရဲ့ အခက်အခဲက ရောဂါ ဖိစီးမှု အခက်အခဲ ဖြစ်တယ်” ဟု ကိုဇေကိုကိုက ပြောပြသည်။
အဆိုပါ ကိုဗစ်ရောဂါ တွေ့ရှိသည့် လုပ်သားများကို အိမ်၌ ထားမည်ဆိုပါကလည်း ၎င်းတို့က အဆောင်နေသူများဖြစ်သော ကြောင့် အဆင်မပြေမှုများ ရှိကာ နေထိုင်မှု အကြပ်အတည်း၊ စားဝတ်နေရေး စသည့်တို့က လက်ရှိ အခြေအနေတွင် တခု နှင့်တခု ကူးစက်ကာ ပိတ်မိနေကြသည်ဟု သူမြင်တွေ့နေရသည့် အခြေအနေကို ပြောပြသည်။
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်မြို့ကို Stay at Home ကြေညာထားသော်လည်း စီးပွားရေးက ကန့်သတ် ပိတ်ဆို့ထား၍ မရသော ကြောင့် ကျန်းမာရေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများကို A၊ B၊ C အဆင့်များ သတ်မှတ်ကာ A အဆင့်ရှိ စက်ရုံများကို အစိုးရက ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးလျက် ရှိသည်။
ယခုအချိန်မှာတော့ စက်ရုံ အများစုက A အဆင့်ရှိ စက်ရုံများ ဖြစ်ကာ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများကို ပိတ်သိမ်းထား၍ မရသော်လည်း လုံလောက်သော အကာကွယ်နှင့် စည်းကမ်းများကို တာဝန်ရှိသူ များအနေနှင့် စနစ်တကျ စစ်ဆေးသလားဆိုသည့် မေးခွန်းမှာ မေးစရာ ဖြစ်နေသည်ဟု မြေပြင် အခြေအနေကို ကြည့်၍ ပြောဆိုဝေဖန်မှုများက ရှိနေသည်။
“အခုက Level2လောက် ရှိတဲ့ Mask တွေကို ဝတ်ပြီးတော့ အလုပ်ဆင်းနေတာ တွေ့ရတယ်။ အိမ်ကနေ စထွက်ထဲက ဒါ ကို ဝတ်ပြီး စက်ရုံအထိ သွားတယ်။ အလုပ်ထဲလည်း ဒါကို ဝတ်ထားရတော့ ပိုးကို ကာကွယ်မပေးတဲ့ အပြင် ကျနော်တို့ အမြင်ကတော့ ချုပ်ထားသလိုတောင်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ လုံးထွေးပြီးတော့ ဒါကို အမှိုက်ပုံထဲ ပစ်ရင် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး တွေလည်း အများကြီး၊ ဒါကြောင့် တာဝန်ရှိသူတွေ ဘယ်လို စစ်နေလဲ စဉ်းစားရမယ်” ဟု စက်ရုံများ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် နေသည်ကို မြင်တွေ့ရသည့်အပေါ် ကိုဇေကိုကိုက သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
တဖက်တွင် ထိုကဲ့သို့ ကျန်းမားရေး အန္တရာယ်များ ရှိနေသော်လည်း အခြေခံ ဘဝများအတွက်က စားဝတ်နေရေးနှင့် အ ဆောင် လခများ ပေးနိုင်ရေးက ပို၍ အရေးကြီးနေသည်။
စားဝတ်နေရေးက အလှူရှင်များ၏ စေတနာနှင့် ဖြေရှင်း၍ ရသော်လည်း အဆောင်လခ ပြဿနာမှာ တချို့ပိုင်ရှင်များက လျှော့ပေးခြင်း၊ စောင့်ဆိုင်းပေးခြင်းသူများ ရှိသလို တချို့ မရမက တောင်းသည့် ပိုင်ရှင်မျိုးကလည်း ရှိနေသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် တရားဝင် သတ်မှတ်ထားသည့် အဆောင်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော် အထိရှိပြီး တရားမဝင်က မည်မျှ နေသည်ကို မသိရှိရသေးပေ။
ကပ်ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆင်းရဲမွဲတေမှုများကြောင့် ဘဝ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ လာကြခြင်း၊ တချို့ နိုင်ငံခြားထွက်ရန် အတွက် အတိုးနှင့် ငွေများချေးယူပြီးခါမှ ကပ်ရောဂါကြောင့် ပြန်လာရသည့်အခါ မိမိနေထိုင်ရာ ကျေးရွာများသို့ ပြန်ရောက် လျှင် ပေးရမည့် ချေးငွေများ မပေးဆပ်နိုင်သည်ကို တွေးကာ ကွာရန်တင်းစင်တာမှ တဆင့် စိတ္တဇ ဆေးရုံများ သို့ပင် ရောက်ရှိ သွားကြရသည့် အခြေအနေများ အထိ ဖြစ်နေသည်။
ထို့ကြောင့် အစိုးရအနေနှင့် ကပ်ရောဂါကြောင့် ပြည်ပက အလုပ်လက်မဲ့နှင့် ပြန်လာရသည့် လုပ်သားများအတွက်လည်း မျှော်လင့်ချက် ရှိလာရန်၊ မည်သို့သော အခွင့်အလမ်းများရှိကြောင်း၊ စီးပွားရေးတွင် အစိုးရအနေနှင့် ကိုဗစ်ပြီးပါက ဘယ်လို ပြင်ဆင်ထားကြောင်း စသည့် မျှော်လင့်ချက် ရှိနိုင်သော အခွင့်အရေးများကို ပြောပေးသည့် နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးပေးသည့် စကားဝိုင်း အစီစဉ်များကို ကွာရန်တင်း စင်တာများတွင် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်နေပြီဟု ပရဟိတ လုပ်ကိုင်သူများ ပြောပြ ချက်အရ သိရသည်။
အထက်ပါ ဆင်းရဲ မွဲတေမှု အကြပ်အတည်းများကြောင့် ယခု နောက်ပိုင်းတွင် လိင်လုပ်သားများ ပို၍ များလာသည်ကို လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာများတွင် တွေ့လာနေရသည်။
ထို့ပြင် ပရဟိတ လုပ်ဆောင်နေသော ကိုဇေကိုကိုတို့ အနေဖြင့် စိုးရိမ်နေသည့်အချက် တခုက စားဝတ်နေရေးကို ထောက်ပံ့နေသော အလှူရှင်များကို မျှော်ကိုးကာ အခြေခံ လူတန်းများ၏ ဘဝများ ဆင်းရဲတွင်း ပို၍ နက်သွားမည်ကိုလည်း တွေးပူရသည်ကို မြင်လာရသဖြင့် အစိုးရအနေနှင့် ပြည်သူကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးသည့် အစီစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးသင့် ကြောင်း ထောက်ပြ ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ပထမလှိုင်းထက် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသော ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းက လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများက စ၍ အောက်ခြေ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ခေါင်းရွက်ထိုး ဈေးသည်များနှင့် ကျပန်း လုပ်သားများ အတွက် အထိနာနေဆဲပင်။
ပြည်တွင်း စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦးက “ဂိုထောင်ပိုင်ရှင်က ၁ နှစ်စာ ဂိုထောင် ငှားခမပေးပါနဲ့၊ ၆ လစာပဲ ပေးပါဆိုတာတောင် ပေးစရာ မရှိလို့ ပစ္စည်းတွေ ဝေငှလိုက်ရမလား” ဟု လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် ကိုဗစ်သည် အစိုးရကို ခြိမ်းခြောက်နေသလို စီးပွားရေးသမားများ၊ လုပ်သားများ၊ လက်လုပ်လက်စား အစ ရှိ သည့် လူတန်းစားမျိုးစုံကို ကပ်ရောဂါက ခြိမ်းခြောက်နေသည်။
အကန့်အသတ်များနှင့် လည်ပတ်နေရသည့် စီးပွားရေးသည် လည်ပတ်မှု အားနည်းသကဲ့သို့ ယင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုး ကျိုး အနေနှင့် ဆင်းရဲမွေတေမှုဒဏ်ကို နိုင်ငံ တနိုင်ငံ၏ အောက်ခြေရှိ လူတန်းများက အများဆုံး ခံစားရသည်မှာ မလွဲ ဧကန် ဖြစ်သည်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှု၏ ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော အလုပ်ကိုင် ပျက်ယွင်း ဝင်ငွေ ထိခိုက်ပြီး စားရေးသောက်ရေး အခက်အခဲတွေ့နေရ အခြေအနေများက ကိုဗစ်၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို သိသာစွာ ခံစားနေရသည့် စီးပွားမြို့တော်ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့၏ ဆင်ခြေ ဖုံး ရပ်ကွက်များတွင် များစွာ တွေ့လာနေရပြီ ဟု လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့များက ပြောကြားချက်များ လူမှုကွန်စာမျက်နှာများကို ကြည့်၍ပင် သိသာနေသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီက “ကိုဗစ်လှိုင်းမှာ အစိုးရအနေနဲ့ ရိက္ခာရော ပိုက်ဆံရော ထောက်ပံ့တာ လေးကြိမ် ရှိပါပြီ။ အဲဒီမှာလိုအပ်တာက တကြိမ်ရပြီးသား သူကို နောက်အကြိမ်တွေမှာ သူပဲ ဖြစ်နေတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုမှာတော့ နည်းနည်းလေး လိုအပ်ချက် ရှိနေတာပေါ့။ ဒါကတော့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို တိုက်ရိုက် ပေး ကိုင်တဲ့ သဘော ရှိတယ်။ ပြောချင်တာက မျှဝေခြင်း အစီစဉ်တွေကိုတော့ အစိုးရက လုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်” ဟု ပြော သည်။
ကိုဗစ် ရိုက်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခြေခံ လူတန်းစားများအတွက်လည်း မြို့နယ်တိုင်းရှိ လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများက “ပြည်သူ့ထံမှ ပြည်သူသို့” အစီစဉ်နှင့် အချင်းချင်း ပံ့ပိုးကူညီမှု များကြောင့် အခက်အခဲ အများကြီး မရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အစိုးရအနေနှင့် လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း အစရှိသည့် မြို့နယ်များသာမက အလယ်အလတ် လူတန်းစား များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာများ စီစဉ်ပေးနိုင်မည်ဆိုလျှင် ပိုကောင်းနိုင်မည်ဟု ထင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
အခြေခံ လူတန်းစားများ အတွက် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသော်လည်း လက်ရှိတွင် ကျူးကျော် ရပ်ကွက်များတွင် နေထိုင်သူ များက ပို၍ အခက်အခဲများ ရှိသည်ကို ပိုတွေ့ရသည် ဟု ဦးညီညီက ပြောသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ဒုတိယလှိုင်းသည် နွမ်းပါးသည့် အိမ်ထောင်စုများအား အထိနာစေခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်စုများအတွက် ကြွေးမြီ ကိစ္စ မှာလည်း စိုးရိမ်စရာ အနေအထား ဖြစ်လာသည်ဟု ကမာ္ဘ့ဘဏ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ ဗဟိုစာရင်းအင်း အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် အစီရင်ခံစာက အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလက အဓိက လုပ်သား ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် အလုပ် မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အလုပ် လုပ်ခွင့်ရသည့် ၅၅ ရာခိုင် နှုန်း မှာလည်း ဝင်ငွေ လျှော့နည်းခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။
ထို့ပြင် အကန့်အသတ်များကို ဖြေလျှော့ပေးလိုက်သည့် သြဂုတ်လတွင်မူ အခြေအနေများ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာမည့် လက္ခဏာ စတင် တွေ့လာရသော်လည်း အဓိက လုပ်သား ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အလုပ် မလုပ်နိုင်ဘဲ ရှိသောကြောင့် ၃၀ ရာ ခိုင်နှုန်းမှာ သြဂုတ်လအတွင်း ကိုဗစ် မတိုင်ခင်နှင့် နှိုင်းစာလျှင် ဝင်ငွေလျှော့နည်း၍ ရကြောင်း ပူးတွဲ အစီရင်ခံစာ က ထုတ် ပြန်ထားသည်။
စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍသည် သြဂုတ်လတွင် ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာသောလည်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသော လယ်သမားက သူတို့ ပုံမှန် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ အသွားအလာ အကန့်အသတ်များက လယ်သမားများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရန်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားရန် အတားအဆီးများ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယင်းအခြေအနေများက ဝင်ငွေ လျှော့နည်းခြင်းနှင့် မရေရာသော လုပ်ငန်းများကြောင့် အိမ်ထောင်စု ၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် စားနေကျ အဟာရထက် လျှော့၍ စားသုံးရကြောင်း ကမာ္ဘ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့အပြင် ကမာ္ဘ့ဘဏ်က မြန်မာ အိမ်ထောင်စုများ၏ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းတို့၏ ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေကြသည့်အပြင် အိမ်ထောင်စုများအတွက် ကြွေးမြီကိစ္စမှာလည်း စိုးရိမ်စရာ အနေအထား ဖြစ်လာ ကြောင်း သြဂုတ်လတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမှု အစီအစဉ်များ၏ အကျိုးခံစားနိုင်ခဲ့ကြသည့် အတွက် ထိုအခြေအနေက ယခင်လများထက် ပိုမိုများပြားသည့် အရေအတွက် ဖြစ်လာသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် ကမာ္ဘ့ဘဏ်က ငွေသား ထောက်ပံ့မှုသည် လိုအပ်နေသည့် အိမ်ထောင်စု အားလုံးကို မပံ့ပိုးပေးနိုင်သေးကြောင်း အိမ်ထောင်စုများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါကလည်း ပံ့ပိုးမှု ပမာဏသည် နည်းပါးနေသေးကြောင်း အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးရန် ဝင်ငွေ ရရှိစေရန် ပံ့ပိုးမှုများကို ကျန်းမာရေး အစီအမံများ နည်းတူ မြန်မာအစိုးရအနေနှင့် ဆက်လက် ပံ့ပိုး ပေးသင့်သည်ဟု ထောက်ပြ အကြံပြုထားသည်။
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် အထိနာနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှလုံးသားမြို့တော် ရန်ကုန်မြို့ကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေ နှင့် ကုစားမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်နေသေးသည့် အခြေအနေပင် ဖြစ်ပေသည်။
]]> အသစ်တက်လာမည့် အစိုးရသစ်အပေါ် လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဘာတွေ မျှော်လင့်ထားကြသလဲ https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2020/11/12/233274.html Thu, 12 Nov 2020 06:38:53 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=233274
ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD က တော်တော်များများ နိုင်တယ်ဆိုတော့ တိုင်းပြည်အတွက်တော့ Reform လုပ်စေ ချင်တယ်ပေါ့။ ၅ နှစ်ဆိုရင် သိပြီလေ။ ဘယ်နေရာတွေကတော့ လိုအပ်ချက် ရှိတယ် ဆိုတာပေါ့။ အကုန်လုံးက ကြိုစားပေမယ့် တချို့ကျ တော့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေ ရှိတယ်။ အကုန်လုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
The post အသစ်တက်လာမည့် အစိုးရသစ်အပေါ် လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဘာတွေ မျှော်လင့်ထားကြသလဲ appeared first on ဧရာဝတီ.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၅ နှစ် တကြိမ် ကျင်းပသည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ယမန်နေ့က ကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့ပြီး လက်ရှိ တည်ဆဲ အစိုးရ ဖြစ်သည့် NLD ပါတီ အစိုးရကသာ ဆက်လက် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် လက်ရှိ အစိုးရ သက်တမ်း ၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း NLD အစိုးရအနေနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွင် အား နည်းချက်၊ အားချက်များ၊ အသစ် ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းမည့် အစိုးရကိုလည်း မြန်မာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက မည်သို့သော မျှော်လင့်ချက် ရှိနေသည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီ သတင်းထောက် မျိုးပပစန်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု၊ လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI)
ဦးရဲမင်းအောင်၊ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု၊ လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI)
ကိုဗစ်-၁၉ က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အားလုံးမှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ အပေါ်မှာ ထိခိုက်မှု ကြီးတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်တော့ တခြား နိုင်ငံတွေလည်း စီးပွားရေးပိုင်းက သက်ရောက်မှုတွေကို တုံ့ပြန်ဖို့ အစီအမံတွေ ချကြတယ်။ မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ ချမှတ် ထားတဲ့ MYANMAR GOVERNMENT RELEASES COVID-19 ECONOMIC RELIEF PLAN (CERP)ကို Review ပြန် လုပ်စေချင်တယ်၊ ဘယ်လောက် လုပ်ပြီးပြီလဲ၊ ဘယ်လောက် ထိရောက်မှု ရှိလဲ၊ ဘာတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ ကျန်သေးသလဲ ဒါတွေကို ဆန်းစစ်ဖို့ လိုတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း Myanmar Economic Recovering and Reform Plan (MERRP) ဆိုပြီး ဦးဆက်အောင်တို့ ပြောနေတာ ရှိတယ်။ ဒါကို ထုတ်ရင်လည်း ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့မှ လုပ်စေချင်တယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရကိုင်ရ လွယ်ကူအောင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ဖြေလျှော့တာ၊ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ အတွက် ကူညီပေးတာ၊ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုရော၊ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရော နှစ်ခုစလုံးကို အားပေးပြီးတော့ ကူညီဖို့ လိုတယ်။
NLD အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ၂၀၁၈ ကနေ ၂၀၃၀ အထိ Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP)က အခု ဆို ၂ နှစ်ကျော်သွားပြီ။ ဘာတွေ လုပ်ထားလဲ၊ ဘာဆက်လုပ်ဖို့ ကျန်သေးလဲ Review လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ကိုဗစ် ပထမလှိုင်း မှာ ထုတ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ လောက်အထိ သုံးမယ့် CERP ဆိုရင်လည်း ၆ လကျော် ကြာပြီဆိုတော့ ပြန်ပြီး ကြည့်ရမယ်။ MERRP ကိုလည်း တကယ် လက်တွေ့မှာ လုပ်နိုင်အောင် ပုဂ္ဂလိကနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ လုပ်သင့်တယ်။
လက်ရှိအစိုးရ သက်တမ်း ၅ နှစ်ကာလမှာတော့ တိုးတက်တဲ့ အပိုင်းတွေလည်း ရှိတယ်။ အားရတဲ့အပိုင်း၊ အားမရတဲ့ အပိုင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တိုးတက်မှု နှေးတယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေက ကြည့်မယ်ဆိုရင် World Bank ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရကိုင်ရ လွယ်မှုအညွှန်းကိန်း ဖြစ်တဲ့ Ease of Doing Business ကြည့်ရင်ရတယ်၊ အဲဒီတော့ ဒီနေရာမှာ ဘဏ္ဍာ ငွေကြေး အရင်းအမြစ်တွေ ချေးငွေတွေနဲ့ လက်လှမ်းမီမှု အပိုင်း မှာ တိုးတက်မှု နည်းတယ်။ နောက်တခါ အခွန်ကိစ္စတွေ တိုးတက်မှု နည်းတယ်လို့ သုံးသပ်တယ်။
အသေးစားနဲ့ အငယ်စား လုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့အတွက် အများကြီး လုပ်ရဦးမယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း တွေမှာ တိုးတက်ဖို့အတွက် Export (ပို့ကုန်) တိုးတက်ရုံတင် မဟုတ်ဘူး Value Chain တလျှောက်လုံးမှာ ရှိတဲ့ သိုလှောင် ရုံတွေ လိုသေးတယ်။ အခြေခံ အဆောက်အအုံပိုင်းတွေမှာ တိုးတက်လာတာ တွေ့ရတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေ ပိုပြီး တော့ ထုတ်လုပ်နိုင်တာတွေ တွေ့ရတယ်။ ဒါတွေကို ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ရမယ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း
ဦးကျော်မင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း
ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD က တော်တော်များများ နိုင်တယ်ဆိုတော့ တိုင်းပြည်အတွက်တော့ Reform လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့။ ၅ နှစ်ဆိုရင် သိပြီလေ။ ဘယ်နေရာတွေကတော့ လိုအပ်ချက် ရှိတယ် ဆိုတာပေါ့။ အကုန်လုံးက ကြိုစားပေမယ့် တချို့ကျ တော့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေ ရှိတယ်။ အကုန်လုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကတော့ အရေးကြီး ဆုံးအချက် ဖြစ်တယ်။ ၂ အချက်ကတော့ ကျနော်တို့က ကုန်သည်အသင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် စီးပွားရေးကို အဓိက အားထည့် မယ် လို့တော့ မှန်းထားတာပေါ့နော်။ ပရောဂျက်တွေ Plan တွေ အကုန်ဆွဲပြီးသားလေ။
ပြီးခဲ့နှစ်အထိကို ကုန်သည်အသင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ အများကြီး တိုးတက်တယ်။ စီးပွားရေးက တော်တော်တော့ ရုန်းရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတွေက ရွေးကောက် ပွဲကိုတအား အားစိုက်နေတယ်။ အခု နောက်ပိုင်းဆိုရင် အကျပ်အတည်းတွေက တဖြည်းဖြည်း ပိုဆိုးလာမယ်။
အဓိကတော့ စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိအောင်လုပ်ရမှာတွေ၊ တိရစ္ဆာန် အစားအစာတွေ ထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်း တွေကို ပိုမြင်တယ်။ တောသူတောင်သားတွေ လုပ်ကိုင်တဲ့အလုပ်တွေက နံပါတ် ၁ ဖြစ်ရမယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အခုက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ် သွားလုပ်တဲ့ ကလေးတွေက အကုန်ပြန်ရောက်နေပြီ။ သူတို့ကို အလုပ်ပေးရမယ့် နှစ် ပိုင်းက စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေ အလုပ်ပေးနိုင်လား၊ လောလောဆယ်တော့ ဒီနေရာတွေမှာ ပေးနိုင်ဖို့ မမြင်ဘူး။
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေမှာက လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ သူတွေကိုတောင် ထိန်းဖို့ ပိုဆိုးနေတယ်။ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းတွေ အော်ဒါရဖို့ အစိုးရအနေနဲ့ တော်တော်များများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမယ်။ ဒါ့ပြင် လုပ်ငန်းရှင်၊ ကုန်သည် အသင်းထဲတွင် မပါတဲ့ လုပ် ငန်းရှင် ကုန်သည်ကြီးများကိုလည်း ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ဆောင်ရမယ်။
ဦးနောင်းနောင်းဟန်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (UMTA)
အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ပထမဆုံး စိန်ခေါ်မှုက ကိုဗစ်ပါပဲ။ ကိုဗစ်က ကာကွယ်ဆေး၊ ကုသဆေးရလို့ ထိန်းသွားနိုင်တယ် ဆိုရင်တောင်မှ အခု လက် ရှိ ပျက်စီးသွားတဲ့ စီးပွားရေး ကဏ္ဍက တွက်ချက်လို့ ခန့်မှန်းလို့ မျှော်မှန်းလို့ မရနိုင်သေးဘူး။
ပထမဆုံး စပြီး ထိခိုက်သွားတဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး၊ အရှည်အကြာဆုံး ခံစားရမှာက ခရီးသွား ကဏ္ဍ ဖြစ်နေတယ်။ ကျန်တဲ့စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွေ တိုးတက်လာတော့မှ ပြည်တွင်း ခရီးသွားဆိုတာ လူတွေ ပိုက်ဆံပြန်ရှိမှ စီးပွားရေး ကောင်းမှ ခရီးသွားနိုင်မှာ။ ပြည်ပ ခရီးသွား ဆိုတာကလည်း သူတို့ဆီမှ ကောင်းလာဦးမှ၊ လေကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးတွေကလည်း အားလုံး ကောင်း လာမှ သေချာမှ ကိုယ့်နိုင်ငံကို လာလည်ကြမှာ ဆိုတော့ ပြန်ပြီး ထူထောင်မယ့် ကာလက ပိုကြာတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကုစားပေးမယ် ဆိုတာ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ခရီးသွားကဏ္ဍကို ဘယ်လို ဦးစားပေးပြီးတော့ ရေရှည်မှာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးတခု အနေနဲ့ ဘယ်လို ပုံသွင်းပြီး လုပ်မလဲ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားတို့ဆို ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံရဲ့ ထောက်တိုင်ထားပြီးတော့မှ ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေကို ဝန်းရံတာမျိုးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ခရီးသွား ကဏ္ဍကို အဓိက စီးပွားရေးကဏ္ဍအနေနဲ့ ထားပြီးလုပ်လာမယ်၊ သွားနိုင်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်။
စစ်အစိုးရ လက်ထက် တောက်လျှောက်မှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အားမပေးခဲ့ဘူး။ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဝင်လာရင် ပြဿနာ တရပ်အနေနဲ့ ယူဆနေရာ ကနေပြီးတော့ ဒါက နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို အဓိက အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့ ကဏ္ဍ မျိုး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့် အစိုးရမျိုး မျှော်လင့်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း
ဦးနေလင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း
အဓိကတော့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး မျှတအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အစိုးရကို မျှော်လင့် ပါတယ်။ စီးပွားရေးဆိုလည်း သူ့နေရာသူ အုပ်ချုပ်တဲ့ သူတွေက ဒီအပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒီကာလမှာ ကိုဗစ်ကြောင့် ကျနော်တို့ ပါဆယ် ပဲ ရောင်းရတယ်။ ဆိုင်တွေ ပိတ်ထားရတော့ ရောင်းအားက သုည ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အခွန်အခတွေ၊ အိမ်ငှားခ၊ ဆိုင်ငှားခ တွေ ကတော့ ဆက်လက် ပေးဆောင်နေရတဲ့အတွက် ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေက စိုက်ထုတ် သုံးစွဲနေရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက် သုံးရက်က ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးနဲ့ ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ တင်ပြထားတယ်။ လက်ရှိ စားသောက်ဆိုင်တွေရဲ့ အခြေအနေ မကောင်းဘူး။ နောက်ထပ် ၂ လ ၃ လသာ သွားမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပိတ် လိုက်ရ မယ့် စားသောက်ဆိုင်တွေက တော်တော်လေး များတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုဗစ်နဲ့အတူ ဆက်ပြီးတော့ ယှဉ်တွဲ သွားရ မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန သတ်မှတ်ချက်နဲ့ အညီ ဖွင့်သင့်ဖွင့်ထိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေတော့ ပြန်ပြီးတော့ ဖွင့်လှစ် ပေးရတော့မှာပဲ။
ကာကွယ်ဆေးမတွေ့မချင်း အခုလိုပဲ နေမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးတွေက အကုန်လုံး ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်ကုန်မယ်၊ ကျ သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် စည်းကမ်းနဲ့ သေချာလေး ချမှတ်ဖို့ လိုသလို ဆိုင်ရှင်တွေက လိုက်နာဖို့ လိုတယ်။
လက်ရှိ အစိုးရမှာတော့ အားနည်းချက်တွေကတော့ ရှိတာပေါ့နော်။ လုပ်ပေးချင်ပေမယ့် ထိရောက်မှု မရှိတဲ့ဟာတွေလည်း အများရှိတယ်။ တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာ တင်ပြပေမယ့် နိုင်ငံတော်အပိုင်းက ပံ့ပိုးပေးနိုင်တာက တော်တော်လေး နည်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဟိုတယ်/ ခရီးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ အသင်းကို ပံ့ပိုးပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ ပြပွဲတွေ သွားပြသတာမျိုးတွေတော့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အားနည်းချက် အသားချက်တွေကတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်တွေ့ လုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ အားကို ယူမယ် ဆိုရင် နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ စားသောက်ဆိုင် ကဏ္ဍသာမက တခြား ကဏ္ဍတွေမှာလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း
ဦးတင်အောင်ဦး၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း
အခု တက်လာမယ့် အစိုးရသစ်ကို ကျနော်တို့ မျှော်လင့်တာကတော့ လက်ရှိမြေပြင်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို အရင်ထက် ပိုပြီး ဂရုစိုက် နားထောင်စေချင်ပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ အဆင်ပြေမှပဲ လုပ် ငန်းတွေ လည်ပတ်နိုင်သလို ဒီလုပ်ငန်းတွေကို မှီခိုနေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့လည်း အဆင်ပြေလာမယ်။ ဒီအပေါ်မှာ သုံးသပ်ရ ရင် အစိုးရအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တာထက် အလေးထားပြီးတော့ ထဲထဲဝင်ဝင် သုံးသပ်စေချင်တယ်။
ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားကဏ္ဍက အခုဆိုရင် ငပလီ၊ မြောက်ဦးတို့က သုညလောက် အထိ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကို ကျော်လွှားဖို့ ဆိုရင် လုပ်ငန်းရှင် တဦးတည်းနဲ့လည်း အဆင်မပြေတော့ဘူး။ နိုင်ငံတော်ကလည်း တော်တော်လေးကို ပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးမှပဲ ဒီ အခြေအနေကို ကျော်လွှားနိုင်မယ်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နဲ့ ကလည်း မောင်တော နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို ပိတ်ထားတာ အခု ဆိုရင် ၃ လ၊ ၄ လလောက် ရှိနေပြီ။ ဒီအပေါ်မှာ မှီခိုပြီးလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အလုပ်သမားတွေ သူ့ရဲ့ အကျိုးဆက် တွေ အများကြီးပဲ။ ဒါကြောင့် မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ အသံတွေကို နားထောင်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ မြေပြင် အခြေအနေကို ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ့် သူတွေ ရရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဦးအောင်မျိုးဟိန်း၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း
အစိုးရအနေနဲ့ ၅ နှစ်သက်တမ်းမှာ အခြေခံ အုတ်မြစ် ချတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီ ၅ နှစ်ကို သင်ယူဆဲကာလလို့ သတ်မှတ် တယ်။ အခု နောက် ၅ နှစ်မှာ ဒီအစိုးရပဲ ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ ဒီထက် အများကြီး အဆင်ပြေလာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
ပြည်တွင်း စားသုံးမှုတွေကို မြှင့်တင်မှ ရမယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလိုပဲ လုပ်ပြီးတော့ စီးပွားရေးကို လည်ပတ်အောင် လုပ်နေတာ ရှိတယ်။ တကယ်လို့ ပြည်တွင်း စားသုံးမှုကို လည်ပတ်အောင် မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ သူ့ဘာသာ လည်လာမယ်လို့ ထင်တဲ့ အတွေးမျိုး အစိုးရမှာ ရှိနေရင် အားလုံးအတွက်က လာမယ့် ၅ နှစ်မှာလည်း အလဟသ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ သုံးစွဲမှု အား တအားလျော့နေတဲ့ အချိန်မှာ စားသုံးသူကို လက်ထဲကို ငွေကြေးသော်လည်းကောင်း တခုခု ပံ့ပိုးမှုတော့ သူတို့ လုပ်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း အထိုက်အလျှောက်တော့ သူ့ဟာနဲ့ သူအလုပ်က ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
အခု ၅ နှစ်တာ ကာလမှာ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် မပြောချင်ပေမယ့် အခုလည်း လက်ရှိအစိုးရပဲ ဆက်လက်ပြီးနောက် ၅ နှစ်ကို တာဝန်ပေးခြင်း ခံရ တဲ့အတွက် ကျနော်ကတော့ စီးပွားရေးတွေကို အရှိန်ပြင်းပြင်း ပြန်လည်ပတ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ လမ်းကြောင်းမှန်ကို သွားချင်တဲ့ အနေအထားရှိပေမယ့် တခါတလေကျတော့လည်း ခုန်ပျံကျော်လွှားပြီး ချက်ချင်းရောက်အောင် သွားချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ ဒါက ကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါ။ ကျနော်တို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေ မယ့် ဒီလို ခုန်ပျံကျော်လွှားသွားမယ်ဆိုရင် စေတနာအမှားလေး တွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဒီ ဥပဒေက ဒါတွေ သက်ရောက် မယ် မလုပ်ခင်မှာ ကြိုတင်ပြောစေချင်တယ်ပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံ ပုံနှိပ်နှင့် ထုတ်ဝေသူ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
ဦးသူရိန်ထွန်း၊ အတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပုံနှိပ်နှင့် ထုတ်ဝေသူ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
စီးပွားရေးပိုင်းမှာတော့ တိုးတက်မှုတွေ နှေးကွေးခဲ့တာ၊ ကျဆင်းခဲ့တာ ရှိခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒီအစိုးရသက်တမ်းမှာ တာ ဝန်ယူရတဲ့ သူတွေကလည်း အတွေ့အကြုံသစ် အနေနဲ့ ဦးဆောင်ရတဲ့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိခဲ့ကြတာတော့ အမှန် ဖြစ်တယ်။ အခုကတော့ သက်တမ်း တခု ပြီးသွားလို့ ဒီတခေါက် အနိုင်ရပြီးလို့ လာမယ့် သက်တမ်းမှာကတော့ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေကို သင်ခန်းစာ ယူပြီးတော့ သူတို့ ပါတီတွင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အစိုးရတွင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်ပေး လိမ့်မယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ထားတယ်။
အဲဒီအတွက် အပြုသဘော တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်ကလည်း မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ကိုဗစ်ရဲ့ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ တကမ္ဘာလုံး စီးပွားရေး ပျက်ကပ်မျိုးတွေ ကြုံနေရတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ သဘောထားတွေက ဆက်ဆံရေးတွေ အားနည်းလာတဲ့အပေါ်မှာ မိမိနိုင်ငံအတွင်းမှာ နိုင်ငံ တကာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေ တိုးဝင်လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာအောင် အစိုးရဘက်က ပြုပြင် ပြောင်းလဲတာတွေ၊ နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ဟာတွေကို နှေးကွေးစွာ မလုပ်ဘဲနဲ့ သွက်သွက်လက်လက် လုပ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုရင် နိုင်ငံအတွက် တိုးတက်နိုင် တာတွေ ရှိပါတယ်။
အဓိကတော့ NLD အစိုးရဘက်မှာလည်း ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုတွေကို လျှော့ချဖို့ အရည်အသွေး မပြည့်မီတဲ့ ဦးဆောင်တဲ့သူတွေ ကိုလည်း ပါတီပုံရိပ်ကျမှာ စိုးလို့ ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ချက်ချင်း အရေးယူတာမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ စတဲ့ ဒါမျိုးတွေ လုပ်မယ်။ တကယ့် စီးပွားရေး ဦးဆောင်နေတဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် အကြံပြုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံချစ်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ် ငန်းရှင်တွေနဲ့လည်း များများ ထိတွေ့ပြီးတော့ မူဝါဒတွေ ဥပဒေတွေ ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ သွက်သွက်လက်လက် လုပ် ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် အားလုံးညီညွတ်ကြမယ်ဆိုရင် တိုးတက်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ နောင်လာမယ့် သက်တမ်းမှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ပိုပြီး ခိုင်မာအောင်နဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လုံခြုံ ချောမွေ့အောင် လုပ်ပေးဖို့ ပိုပြီး အရေးကြီးတာပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ ရအောင် တည်ဆောက်ရမှာပဲ ဖြစ်တယ်။ ပြီး တော့ အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေ အခုထက်ပိုပြီးတော့ ကောင်းအောင် လုပ်သင့်တာပေါ့။
လက်ရှိ အစိုးရ သက် တမ်းမှာကျတော့ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ အားနည်းချက်တွေ အခက်အခဲတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အန်ကယ်တို့က နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေး ဆိုတော့ ဒီမှာက စီးပွားရေးတွေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့က ငြိမ်းချမ်းရေးကို အပြည့်အဝ တည်ဆောက်နိုင်ရင် ကောင်း တာပေါ့။
အခု လာမယ့် သက်တမ်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအနေနဲ့လည်း အခုထက် ပိုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထဲထဲဝင်ဝင် ဆောင်ရွက် ပေးဖို့ လိုအပ်တာပေါ့။ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရဆိုတာကလည်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ခန့်တဲ့ အစိုးရပဲ ဖြစ်တယ်။ လက်ရှိမှာ တော့ သူတို့က နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမှာ ထိတွေ့ ပါဝင်မှုက နည်းနည်း အားနည်းနေတယ်။ ဒါလေးတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ လိုတယ်။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး တံခါးပေါက်က တရုတ်ဘက်ကပဲ သော့ကိုင်ထားသလို ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က လည်း လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို တောင်းဆို ညှိနှိုင်းဖို့ လိုအပ်တယ်။ တရုတ်ဘက်က ပိတ်ဆို ပိတ်၊ ဖွင့်ဆိုမှဖွင့် အနေအ ထား ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးမှာ နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ ပါဝါတွေ ချိန်ညှိထားဖို့ လိုနေပြီ။ ဒါကလည်း အရေးကြီးတယ်။ သူများဘက်က လုပ်နေတာပဲ ခံမနေဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို တောင်းဆို ကိုင်တွယ်၊ ဖြေရှင်းဖို့ လိုနေပြီ။
]]> မဲရှုံးသွားသည့် အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ရင်ဖွင့်သံ https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2020/11/09/233103.html Mon, 09 Nov 2020 10:36:48 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=233103
လွှတ်တော်သို့ မဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် အလုပ်သမား၊ လယ်သမားနှင့် အခြေခံလူတန်းစားဘဝတို့ လုပ်ဆောင်မည့် အခြေအနေများကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ပပ က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
The post မဲရှုံးသွားသည့် အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ရင်ဖွင့်သံ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> JICA စီမံကိန်း ၂ ခုအတွက် ဂျပန်-မြန်မာ ချေးငွေ စာချုပ် ချုပ်ဆို https://burma.irrawaddy.com/news/2020/11/05/232858.html Thu, 05 Nov 2020 12:03:41 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=232858
အရှေ့- အနောက် စီးပွား‌ရေးစင်္ကြန် အမြန်လမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (ပဲခူး- ကျိုက်ထို လမ်းပိုင်း)” နှင့် “အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား‌ရေး လုပ်ငန်းများ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (တတိယအဆင့်)” တို့ကို ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းနှစ်ခု၏ တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၄၁၀ ရှိ
The post JICA စီမံကိန်း ၂ ခုအတွက် ဂျပန်-မြန်မာ ချေးငွေ စာချုပ် ချုပ်ဆို appeared first on ဧရာဝတီ.
ဂျပန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖော်ဆောင်မည့် စီမံကိန်း နှစ်ခုအတွက် ချေးငွေအဖြစ် ဂျပန်ယန်း ၄၂၇၇၉ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၁၀ သန်း) ထောက်ပံ့ပေးမည့် ချေးငွေ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံ အမတ် Mr. MARUYAMA Ichiro နှင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ဒု ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း တို့က ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ချေးငွေ စီမံကိန်း နှစ်ခုမှာ “အရှေ့- အနောက် စီးပွား‌ရေး စင်္ကြန် အမြန်လမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (ပဲခူး- ကျိုက်ထို လမ်းပိုင်း)” နှင့် “အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား‌ရေး လုပ်ငန်းများ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (တတိယအဆင့်)” တို့ကို ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းနှစ်ခု၏ တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၄၁၀ ရှိကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယင်း ချေးငွေများကို စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်အနေနှင့် အတိုးနှုန်း ၁ နှစ်လျှင် ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ထားပြီး ပြန်ဆပ်ရမည့် ကာလမှာ နှစ် ၄၀ ( ဆိုင်းငံ့ကာလ ၁၀ နှစ် အပါအဝင်) ချုပ်နှောင်ရက် မရှိ သတ်မှတ်ထားသည်။
အရှေ့- အနောက် စီးပွား‌ရေး စင်္ကြန် အမြန်လမ်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (ပဲခူး-ကျိုက်ထိုလမ်းပိုင်း) သည် မဟာမဲခေါင် ဒေသခွဲ အရှေ့-အနောက်စီးပွားရေးစင်္ကြန် အဝေးပြေးလမ်း ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ပြီး စစ်တောင်းမြစ်ကို ဖြတ်၍ တံတားအသစ်တစင်း ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေး စင်္ကြန်ပေါ်ရှိ တံတားများ ထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်မှုကို မြှင့်တင်ပေး ရန်တို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်း ၂ ခုအတွက် ချေးငွေ စာချုပ် ချုပ်ဆိုစဉ် ( ဓာတ်ပုံ- JICA)
ထို့ပြင် လမ်းများနှင့် တံတားများ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းသည့် စနစ်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဗဟိုသင်တန်းကျောင်း (သုဝဏ္ဏ) ကို လည်း ပြန်လည် ပြုပြင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည့် အရှေ့-အနောက် စီးပွားရေး စင်္ကြန်က မွန်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကရင်ပြည်နယ်များရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်မှုအပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စီးပွားရေးကို အပြန် အလှန် ထိန်းညှိပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး (အရှေ့ပိုင်း) ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုကြီးက “တရုတ် နဲ့ ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင် တော်တော်များများက ဒီမှာ လုပ်ငန်းလုပ်မယ် ဆိုပြီးတော့ နဂိုတုန်းက အစပျိုးခဲ့တာ။ ပဲခူး ဟံသာဝတီ ရယ်၊ နောက် ကျိုက်ထိုဘက်ပေါ့၊ အဲဒီမှာ လုပ်မယ်။ ဒီ လုပ်တယ်ဆိုတော့ ကြိုဆိုရမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဓိက တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂျပန်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကြီးကြီးမားမား လုပ်တာက သီလဝါလိုဘက်မှာပဲ ရှိတယ်။ ကျိုက်ထိုမှာ လုပ် မယ်ဆို ပြည်ပမှာ နှစ်နဲ့ချီ အလုပ်သွား လုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ပြန်ပြီး မိသားစုနဲ့ အလုပ်နိုင်မယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
အထက်ပါ အရှေ့- အနောက် စီးပွား‌ရေး စင်္ကြန် အမြန်လမ်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (ပဲခူး-ကျိုက်ထိုလမ်းပိုင်း) အကောင်အထည် ဖော်မည်ဆိုလျှင် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အနေနှင့် စက်ရုံအကြီးများ သာမက အသေးစားနှင့် အလတ်စား (Msme) လုပ်ငန်းများ ပို၍ တိုးတက်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား‌ရေး လုပ်ငန်းများ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (တတိယအဆင့်) သည် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား‌ရေး လုပ်ငန်းများသို့ အပေါင်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ဖြေလျှော့ထားသော ကာလ လတ်နှင့် ကာလရှည် ချေးငွေများဖြင့် အရင်းအနှီးများကို ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး COVID-19 အခြေအနေအရ အရေးပေါ် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပေးမှု ဖြစ်ကြောင်း (JICA) က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယခုလို ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းသည့် အခြေအနေများတွင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သော စီမံကိန်း နှစ်ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံအား အား မလျှော့ဘဲ နာလန်ထူရေးနှင့် စီးပွားရေး ရေရှည်တည်တံ့စွာ တိုးတက်ရေးအတွက် အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် ငွေကြေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှစ်ခုစလုံးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း JICA မြန်မာရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်ချုပ် Mr.Sakakura Noriji က ပြောကြားထားသည်။
ထို သက်သာသော ချေးငွေများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထဝီ အနေအထား အားသာချက်ကို မြင်သာစေမည့် စင်္ကြန်လမ်း၏ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတလွှား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမျိုးဖြင့် SME လုပ်ငန်းများ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ဆုံးရူံးမှုများမှ ပြန်လည် နာလန်ထူနိုင်ရေး တို့အတွက် ပံ့ပိုး ကူညီ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
]]> လက်ခုပ်ကုန်း ဟိုတယ်စီမံကိန်း အပြိုင်တင်ဒါ အစိုးရခေါ်ယူ https://burma.irrawaddy.com/business/2020/11/03/232734.html Tue, 03 Nov 2020 12:53:02 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=232734
သူနဲ့ အပြိုင် ငှားရမ်းခတွေ ဘာတွေ ပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကို အခု တင်ဒါခေါ်တာ ၁ လ အချိန်ပေးတာ ဒီလ ၂၆ ရက်မှာ ပြည့်မှာ ဆိုတော့ လာပြီး တင်ဒါပြိုင်တဲ့သူရှိရင် စိစစ်မယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကို ပြန် တင်မယ်။ စီးပွားရေး ကော်မတီတင်မယ်။ ပြီးရင်တော့ ဆက်လုပ်သွားမှာ
The post လက်ခုပ်ကုန်း ဟိုတယ်စီမံကိန်း အပြိုင်တင်ဒါ အစိုးရခေါ်ယူ appeared first on ဧရာဝတီ.
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် လက်ခုပ်ကုန်းကျေးရွာရှိ နိုင်ငံပိုင် လက်ခုပ်ကုန်း ဟိုတယ်နှင့် မြေ ၂၈ ဧက ပေါ်တွင် ဟိုတယ်စီမံကိန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်လိုသူများအနေဖြင့် Yangon Wanyuan International Island ကုမ္ပဏီနှင့် အပြိုင် တင်ဒါတင်နိုင်ကြောင်း အစိုးရက ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။
ယင်း ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေနေရာတွင် Yangon Wanyuan International Island ကုမ္ပဏီက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ကျပ် သန်း ၅ ထောင်နှင့် အခန်း ၈၀ ပါသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိုတယ်(ဘန်ဂလိုပုံစံ) အခန်းလေးခန်းပါ နှစ်ထပ် အဆောက်အဦး အလုံး ၂၀ ကို တည်ဆောက်၊ လည်ပတ်၊ လွှဲ ပြောင်းစနစ် (BOT) ဖြင့် တည်ဆောက်ရန်နှင့် နိုင်ငံ တော်ထံမှ နှစ် ၃၀ နှင့် နောက်ထပ်နှစ်တိုး ၁၀ နှစ်၊ ၂ ကြိမ်ဖြင့် သက်တမ်းတိုးငှားရမ်းမည်ဟု ကုမ္ပဏီက အဆိုပြုထားသည်။
ထို့ကြောင့် Yangon Wanyuan International Island ကုမ္ပဏီနှင့် အပြိုင် တင်ဒါ တင်သွင်းလိုသော ပြည်တွင်း လုပ်ငန်း ရှင်များ အနေနှင့် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကောင်းထွဋ်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက “လက်ခုပ်ကုန်းက လုပ်နေတာကြာပြီ မဖွံ့ဖြိုးဘူး။ အခုက အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါ ပေးတာမို့ လမ်း တွေလည်း ကောင်းလာပြီ လျှပ်စစ်မီးလည်း သွယ်ပေးမယ့် အစီအစဉ် ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်တယ်။ အဆို ပြုတဲ့ ကုမ္ပဏီက ရှိလို့ ယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါ (Swiss Challenge) ခေါ်တာ။ ဆိုလိုချင်တဲ့ သဘောကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသွားတာပေါ့။ သူ့ကို ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ သူကနေ အဆိုပြုထားတယ်ဆိုတာ ချပြတာ”ဟု ပြောသည်။
ယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါ (Swiss Challenge) ခေါ်ယူခြင်း ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ တခုက မိမိ လုပ်ကိုင်လိုသည့် စီမံကိန်း တခုကို အစမှ အဆုံး အကုန်အကျခံ လေ့လာစစ်တမ်းပြုလုပ်၍ စီမံကိန်းပုံစံ ထုတ်ပေးပြီး ယင်းပုံစံ ထွက်လာလျှင် အခြားကုမ္ပဏီများနှင့် အတူ ဈေးပြိုင် တင်ဒါ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ထိုကုမ္ပဏီက တင်ဒါ ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် မအောင်မြင်ပါက စီမံကိန်းကို တင်ဒါအောင်သည့် ကုမ္ပဏီက မူလစီမံကိန်း ပုံစံထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီကို ကုန်စကျစရိတ်များ ပြန်လည် ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ နိုင်ငံပိုင် ဟိုတယ်နှင့် မြေနေရာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပြည်တွင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကို Swiss Challenge ခေါ်ယူခြင်းမှာ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်နှင့် အနီးဆုံး ဒေသဖြစ်သည့်အပြင် ရန်ကုန်မြို့နှင့်လည်း အနီးဆုံး အပန်းဖြေဒေသ တခု ဖြစ်သောကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အားသာချက် ရှိနေသဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရသည်။
“တည်ဆောက်ရေးကတော့ Yangon Wanyuan International Island ကုမ္ပဏီက အဆိုပြုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်နီးပါး လောက် ထဲကဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူနဲ့ အပြိုင် ငှားရမ်းခတွေ ဘာတွေ ပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကို အခု တင်ဒါခေါ်တာ ၁ လ အချိန်ပေးတာ ဒီလ ၂၆ ရက်မှာ ပြည့်မှာ ဆိုတော့ လာပြီး တင်ဒါပြိုင်တဲ့သူရှိရင် စိစစ်မယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကို ပြန် တင်မယ်။ စီးပွားရေး ကော်မတီတင်မယ်။ ပြီးရင်တော့ ဆက်လုပ်သွားမှာ”ဟု ဟိုတယ်စီမံကိန်း၏ တည်ဆောက်ရေး ကာလ အခြေအနေကို ဦးကောင်းထွဋ်က ပြောကြားသည်။
Swiss Challenge ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများကိုလည်း ၎င်းတို့၏ ငွေကြေး ခိုင်မာမှု၊ ဟိုတယ် လုပ်ငန်း ပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု စသည့် အခြေအနေများကို ကြည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ သဘော ထား မှတ်ချက်များကို ရယူ၍ Public–Private Partnership (PPP)နှင့် အညီ ပြည့်စုံမှသာ ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် လက်ရှိ ပြည်တွင်းရှိ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၏ အခြေအနေသည် ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်း ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် တချို့ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင်များက ဟိုတယ်များကို ပြန်လည်ရောင်းချလာသည်များရှိကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့် မြမင်္ဂလာ ဟို တယ် စီမံကိန်း ယှဉ်ပြိုင် တင်ဒါ ခေါ်ယူစဉ်ကပင် ဝင်ပြိုင်မည့်သူမရှိ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာနမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်ဟိုတယ်ဇုန် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မြင့်က “လက်ခုပ်ကုန်းကိစ္စတော့ ဘာမှ မပြောချင်ပါဘူး။ အခု ဟိုတယ်တွေ အနေ အထားကတော့ မကောင်းသေးဘူး။ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေက နိုဝင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ ရှိနေသေးတာဆိုတော့ ဧည့်သည်တွေ မလာသေးတော့ ဟိုတယ်တွေက အခုအချိန်ထိတော့ အရှုံးနဲ့ပဲသွားနေရသေးတာပေါ့”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက “ဒီအချိန်မှာတော့ အကုန်လုံးက စိတ်ဓာတ်ပါကျနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ တင်ဒါခေါ်တဲ့အပိုင်းက နည်းနည်းတော့ ခက်မယ်။ အလုအယက် ဝယ်ကြမယ့် ဆွဲကြမယ့် အနေအထားမရှိဘူး”ဟု ဟိုတယ် စီမံကိန်းများ တင်ဒါခေါ်ယူမှု အပိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိ အစိုးရက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ချေးငွေများ ထုတ်ပေးနေသည်ကလည်း ရန်ကုန် ဟိုတယ်ဇုန် အတွက်က ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ဝန်းကျင်သာရှိသည့် အတွက် ခုသာခံသာရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ထိထိရောက်ရောက် ပေးနိုင်သည့် ပမာဏ မရှိကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။
ယင်းအပြင် ကိုဗစ်ဒုတိယလိူင်းကြောင့် ပြည်တွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့် Re Opening လုပ်ငန်း စဉ်များကိုလည်း လက်ရှိတွင် ရပ်တန့် ခဲ့ရကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဝန်ကြီးဌာနက သိရသည်။
]]> ချေးငွေယူထားသူများ၏ အတိုးနှင့်အရင်း အစိုးရ ယာယီဆပ်ပေးမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/29/232512.html Thu, 29 Oct 2020 12:17:50 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=232512
ထိုသို့ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့များမှ ချေးငွေ ရယူထားသူများထံက ၂ လစာ ရပ်ဆိုင်းပေးရသည့် ငွေပမာဏအတွက် ချေးငွေ သက်တမ်း ၁ နှစ်၊ ဆိုင်းငံ့ကာလ ၆ လနှင့် အတိုးမဲ့ ချေးငွေကို မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်မှတဆင့် ထုတ်ချေးပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
The post ချေးငွေယူထားသူများ၏ အတိုးနှင့်အရင်း အစိုးရ ယာယီဆပ်ပေးမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ကိုဗစ်ကြောင့် ရပ်နားထားသော ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက် ပြန်ဖွင့် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/22/232141.html Thu, 22 Oct 2020 08:13:44 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=232141
ရွှေဈေးကွက် ရပ်နားချိန်တွင် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး မြင့်တက်မှုကြောင့် ပြည်တွင်း အခေါက်ရွှေဈေးမှာလည်း ၁ ကျပ် သားလျှင် ကျပ် ၁၃ သိန်းကျော်အထိ ရှိလာပြီး ရွှေဈေးကွက် ပြန်လည် စတင်မည့် ရက်တွင် ကျပ် ၁၃ သိန်းကျော်နှင့်သာ ဈေးကွက်ဖွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင်လည်း ဖြစ်သူ ဦးမျိုးမြင့်က ပြောသည်။
The post ကိုဗစ်ကြောင့် ရပ်နားထားသော ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက် ပြန်ဖွင့် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> အစိုးရက ရခိုင်နှင့် တိုင်း ၃တိုင်း၌ သတ်မှတ်ဈေးဖြင့် စပါးဝယ်မည် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/19/231964.html Mon, 19 Oct 2020 12:37:01 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231964
ယခုနှစ်တွင် အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက် လျာထားချက်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၃ ခုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် စပါးတင်း ပေါင်း ၃၈ သိန်းခန့် ဝယ်ယူရန် မှန်းထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းဦးက ပြော သည်။
The post အစိုးရက ရခိုင်နှင့် တိုင်း ၃တိုင်း၌ သတ်မှတ်ဈေးဖြင့် စပါးဝယ်မည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ရန်ကုန် တောင်သူဈေးကား အစီအစဉ် ပြန်လည် စတင်မည် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/16/231724.html Fri, 16 Oct 2020 05:21:39 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231724
တောင်သူဈေးကား အစီအစဉ်သည် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း Stay at Home ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် အချို့ လမ်း၊ ရပ်ကွက်၊ အိမ်ရာများက အဝင်မခံကြသဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလမှ ယနေ့အထိ ရပ်နားထားခဲ့ရာမှ ယခု ရက် ပိုင်းအတွင်း ပြန်လည် စတင်ရန် အသင်းက စီစဉ်ခြင်းဖြစ်
The post ရန်ကုန် တောင်သူဈေးကား အစီအစဉ် ပြန်လည် စတင်မည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ချေးငွေ အတိုး အရင်းများကို အတင်းအကြပ် ကောက်ခံပါက လိုင်စင်ပိတ်မည် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/15/231683.html Thu, 15 Oct 2020 09:05:10 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231683
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်မှု ကျဆင်းနေသည့် ကာလအတွင်း အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့များ အနေဖြင့် ပြန်ဆပ်ငွေများကို အတိုးနှင့်အရင်းများ အတင်းအကြပ် ကောက်ခံခြင်းမပြုရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ထပ်မံ ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်
The post ချေးငွေ အတိုး အရင်းများကို အတင်းအကြပ် ကောက်ခံပါက လိုင်စင်ပိတ်မည် appeared first on ဧရာဝတီ.
COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ် ကာလအတွင်း အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ပြန်ဆပ်ငွေများ ကို အတင်းအကြပ် ကောက်ခံခြင်း ပြုလုပ်ပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ဦးဇော်နိုင်က “ကိုဗစ် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကာလမှာ လုပ်ငန်းတွေက မလည်ပတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အရင်းနဲ့အတိုး ပြန်ဆပ်ဖို့ အချိန်ကျပေမယ့်လည်း ပြန်မဆပ်နိုင်သေးရင် ချေးယူသူနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဘယ်နှလ ရွှေ့ ဆိုင်းပေးပါလို့ မပြောပါဘူး။ အတင်းအကြပ်ကောက်ရင် ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ သတိပေးတာက စပြီး လိုင်စင် ပိတ်သိမ်း တဲ့အထိ အရေးယူလို့ ရတယ်။ ဒီအတိုင်း လုပ်ရမှာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနနှင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားဆင့် ဗဟိုကော် မတီ တို့ကလည်း အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များကို ထပ်မံ ထုတ်ပြန်လျက် ရှိသဖြင့် အသင်းဝင်များ (Customer)၏ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်မှု ကျဆင်းနေသည့် ကာလအတွင်း အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး အဖွဲ့များအနေနှင့် ပြန်ဆပ်ငွေများကို အတိုးနှင့် အရင်းများ အတင်းအကြပ် ကောက်ခံခြင်းမပြုရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ထပ်မံ ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုညွှန်ကြားချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု မရှိကြောင်း အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီက စစ်ဆေး တွေ့ရှိပါက အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း ဥပဒေပါ စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်းများနှင့် အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့များအနေနှင့် အစိုးရညွှန်ကြားထားသော ကာလအတွင်း ပြန်ဆပ်ငွေများကို အသင်းဝင် များထံက အတင်းအကြပ် ကောက်ခံခြင်းကို ကော်မတီက စစ်ဆေးတွေ့၍ သော်လည်းကောင်း၊ အသင်းဝင်များက တိုင် ကြား၍ သော်လည်းကောင်း တွေ့ရှိခဲ့လျှင် ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇော်နိုင်က ရှင်းပြ သည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ကိုဗစ် ပထမလှိုင်းတုန်းက အစိုးရက ပြန်ဆပ်ငွေ ဆိုင်းငံ့ပေးမယ့် တချို့ Microfinance လုပ်ငန်းတွေက တောင်း တာတွေကိုတော့ ကျနော်တို့ ကော်မတီက ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ရတာ ရှိခဲ့တယ်။ အကယ်၍များ ဒါမျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် တိုင်လို့ ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ စာလည်း ပို့လို့ရပါတယ်။ လိုအပ်သလို အရေးယူပေးပါ့မယ်” ဟု ၎င်းက ထပ် လောင်း ပြောပြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းတွင် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့များက ပြန်ဆပ်ငွေများကို ၁ လ ယာယီဆိုင်းငံ့ပေးရန် နှင့် အတိုးများကိုလည်း အတင်းအကြပ် ကောက်ခံခြင်း မပြုရန် ငွေချေးယူသူ အသင်းသားများနှင့် ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သော်လည်း တချို့လုပ်ငန်းများက ၂ လပေါင်း ကောက်ခံခြင်း၊ အသင်းသားများနှင့် အဆင်မပြေမှုများ ရှိခဲ့သဖြင့် ဖြေရှင်းပေးရသည့် လုပ်ငန်းများ ရှိခဲ့သည် ဦးဇော်နိုင်က ပြောသည်။
လက်ရှိ အချိန်တွင် လုပ်ငန်းအားလုံးကလည်း ရပ်တန့်လုနီးပါး ဖြစ်နေသဖြင့် ချေးငွေ ပြန်လည် မဆပ်နိုင်သည့်သူက များ ပြားသော်လည်း လည်ပတ်နေသည့် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းများက ညွှန်ကြားချက်များ မထုတ်ခင်ကပင် ချိန် ဆပြီး လုပ်နေရသည့် အနေအထား ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အသေးစားငွေ ရေးကြေးရေး ကူညီမှုအသင်း (MMFA) ၏ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဖြူယမင်းမြတ်က ပြောသည်။
ဒီတပတ်မှာ ကျပ် ၄ သောင်းပေးရင် ၂ သောင်းတော့ ပေးပေါ့။ ဒါကလည်း ၁ ပတ်ပဲ ရမယ်။ နောက်လာမည့် ပတ်တွေက အပြည့်ပေးရမယ် ဆိုတော့ အတင်း အကြပ် တောင်းနေတဲ့ သဘောပဲ ရှိတယ်။ ဆိုင်းပေးတာ မရှိဘူး။
ယခုအချိန်တွင် Microfinance လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် တချို့လုပ်ငန်းများမှာ ငွေထုတ်ချေးပေးမှုများ ရှိသော်လည်း ယခင် ကဲ့သို့ လုံလောက်သည့် ပမာဏ များများစားစား ချေးယူ၍ မရခြင်း၊ ချေးငွေရယူရာတွင် စာချုပ်စာတမ်း အာမခံချက်၊ စိစစ်မှု စသည့်တို့ ပိုများလာသည် ဟုလည်း ငွေချေးယူသူများက ဆိုကြသည်။
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ချေးငွေယူထားသည့် အထည်ချုပ် အလုပ်သမား မမာမာက “အစိုးက စာမထုတ်ခင်ကတော့ ကျမတို့ သူတို့ကို ပြောပြတယ်။ ပြန်ဆပ်ငွေကို ခဏလောက် ဆိုင်းပေးပါပေါ့။ နည်းနည်းလောက် လျှော့ယူပါလို့ ကျမတို့ အဖွဲ့မှာက ဆယ်ယောက် ရှိတယ်။ ပြန်ပေးနိုင်တဲ့သူ ရှိသလို့ အခုက မရှိတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီကာလက ကျန်တဲ့သူကလည်း အလုပ်မကောင်းတော့ မပေးနိုင်တဲ့သူအစား စိုက်ပြီး သူတို့ကို မပေးနိုင်ဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက “အဲဒီလိုပြောတော့ သူတို့ ဒီတပတ်တော့ ရမယ့်၊ ဥပမာ ကျမက ဒီတပတ်မှာ ကျပ် ၄ သောင်းပေးရင် ၂ သောင်းတော့ ပေးပေါ့။ ဒါကလည်း ၁ ပတ်ပဲ ရမယ်။ နောက်လာမည့် ပတ်တွေက အပြည့်ပေးရမယ် ဆိုတော့ အတင်း အကြပ် တောင်းနေတဲ့ သဘောပဲ ရှိတယ်။ ဆိုင်းပေးတာ မရှိဘူး။ အခုကတော့ အစိုးရက စာထုတ်လိုက်ပြီ ဆိုတော့ လာ မယ့် တပတ်မှာ ဘယ်လို ပြောမလဲ မသိသေးဘူး” ဟု ဆိုသည်။
ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများတွင် အသေးစားငွေရေး ကြေးရေးလုပ်ငန်းများ ချေးယူသူများက အသင်းဝင် အစုအဖွဲ့များနှင့် ချေးယူ ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ကိုဗစ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် တချို့စက်ရုံ များက သတ်မှတ်ချက်နှင့် မညီသည့် စက်ရုံများကို ပိတ်ထားခြင်း တို့ကြောင့် ဝင်ငွေ ရရှိမှုများ ခက်ခဲနေကြောင်း သိရ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသေးစား ငွေကြေးလုပ်ငန်းများမှ ငွေချေးယူ သူပေါင်း၂ သန်းခန့် ရှိပြီး ချေးငွေ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၃၅၀ သန်းခန့်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိကြောင်း MMFA အသင်း၏ စာရင်းဇယားများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိ အစိုးရမှ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့များသို့ ကျပ် ဘီလီယံ ၁၀၀ ထုတ်ချေးပေးမှု အနေဖြင့်လည်း အဖွဲ့ကြီး များ ကျပ် ၁၀ ဘီလီယံမှ၂၀ ဘီလီယံ ယူပြီး စားသောက်ဆိုင်နှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များသို့ စတင် ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိ သည်။
မြန်မာ တနိုင်ငံလုံး အနေနှင့် Microfinance ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသည်မှာ ၁၉၃ ခု ရှိကြောင်း စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာနက သိရသည်။
အသေးစား ငွေကြေးကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အကျိုးအမြတ်ယူသော အဖွဲ့များ၊ အသေးစား ငွေကြေးလုပ်ငန်း လိုင်စင် ယူထားသော သမဝါယမ ငွေကြေးအဖွဲ့များ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အသေးစားငွေ ကြေး လုပ်ငန်း ပြုလုပ်သည့် ပြည်တွင်း အဖွဲ့များနှင့် စီးပွားဖြစ် အသေးစား ငွေကြေး အဖွဲ့များ ပါဝင်သည်။
]]> ကျန်တဲ့ အာမခံ စနစ်တွေကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရှိတယ် https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2020/10/15/231673.html Thu, 15 Oct 2020 08:56:20 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231673
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ဒုတိယ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အုန်းကို ဧရာဝတီသတင်းဌာန သတင်းထောက် မျိုးပပစန်းမှ မေးမြန်းထားသည်။
The post ကျန်တဲ့ အာမခံ စနစ်တွေကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရှိတယ် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ကုန်ကားပြေးဆွဲမှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရပ်ဆိုင်း https://burma.irrawaddy.com/business/2020/10/13/231515.html Tue, 13 Oct 2020 12:44:15 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231515
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ စရိတ်ကို သက်သာသွားသော်လည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ကိုင်နေ သော လုပ်ငန်းရှင်များက ဆေးစစ်ခ လျှော့ခြင်းထက် များများစစ်ပြီး မြန်မြန် ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ စီးဆင်းနိုင်ရန် မျှော်လင့်နေကြသည်။
The post ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ကုန်ကားပြေးဆွဲမှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရပ်ဆိုင်း appeared first on ဧရာဝတီ.
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကုန်ကားဂိတ်များ ရပ်နားထားသည်မှာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အဝေးပြေး ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်မိုးက “ တချို့ ကားသမား တွေ က နားကြတယ်။ တချို့ကျတော့ ပိတ်လိုက်တာတွေရှိတယ်။ အစစ်မခံချင်ဘူး၊ ရောဂါ ကူးမှာ ကြောက်နေကြတာ ကြောင့် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းတော့ သွားနေတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားသို့ ကုန်စည် သယ်ယူပို့ဆောင်နေသော ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်နောက် လိုက်များကို COVID-19 ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း ဆေးစစ်ခြင်းကို ရန်ကုန်မြို့ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ MCC ခန်းမတွင် အောက် တိုဘာလ ၄ ရက်မှ စတင်၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အခြားတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များတွင်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။
ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆေးစစ်ချက်မှာ ၇၂ နာရီကြာလျှင် တကြိမ်ပြန်လည် စစ်ဆေးရသောကြောင့် ၃ ရက်တခါ စစ်ဆေးရခြင်းက တချို့ ခရီးဝေး သယ်ယူပို့ဆောင်နေသော ယာဉ်လုပ်သားများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ရှိသဖြင့် တချို့ ကုန်ကားများက မထွက်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကုန်ကားပိုင်ရှင် ဦးမောင်မောင်က ပြောသည်။
“သွားလာတာရှိပေမယ့် ကားတွေက လျော့သွားတယ်။ ကားတွေ မထွက်တော့ ကုန်တင်ရတာ နည်းနည်း ခက်လာတာပေါ့ ကားသမားတွေကလည်း နှာခေါင်း အထိုးမခံ နိုင်ကြဘူးလေ။ ဥပမာ တချို့ ကား ၅ စီး ထွက်တဲ့သူက ၁ စီး၊ ၂စီးပဲ ထွက် တော့တယ်ပေါ့။ တချို့က ပိတ်ထားတယ်။ ”
၎င်းက “သွားလာတာရှိပေမယ့် ကားတွေက လျော့သွားတယ်။ ကားတွေ မထွက်တော့ ကုန်တင်ရတာ နည်းနည်း ခက်လာတာပေါ့ ကားသမားတွေကလည်း နှာခေါင်း အထိုးမခံ နိုင်ကြဘူးလေ။ ဥပမာ တချို့ ကား ၅ စီး ထွက်တဲ့သူက ၁ စီး၊ ၂စီးပဲ ထွက် တော့တယ်ပေါ့။ တချို့က ပိတ်ထားတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးတွေ ရှိတယ်”ဟု ရှင်းပြသည်။
ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းများနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်များ COVID-19 ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း Rapid Antigen Test Kit နှင့် ဆေးစစ်ခကို ယခင်က ၁ ကြိမ်လျှင် ကျပ် ၂ သောင်း ပေးရသည်မှ ယခု အချိန်တွင် ထက်ဝက်နှုန်းဖြစ်သည့် ကျပ် ၁ သောင်းသို့ လျှော့ချသတ်မှတ်ကြောင်းလည်း မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) က အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယင်းအချက်က ကုန်စည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ စရိတ်ကို သက်သာသွားသော်လည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ကိုင်နေ သော လုပ်ငန်းရှင်များက ဆေးစစ်ခ လျှော့ခြင်းထက် များများစစ်ပြီး မြန်မြန် ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ စီးဆင်းနိုင်ရန် မျှော်လင့်နေကြသည်။
“ ၇၂ နာရီကို တခါ စစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဒရိုင်ဘာတွေက သိပ်ပြီး မစစ်ချင်ကြဘူး။ သူတို့ကို စစ်ပြီးတော့ ၇၂ နာရီဆိုတော့ ၃ ရက်တခါ စစ်နေရတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်တယ်။ အဝေးသွားတဲ့ သူတွေကျတော့ တလကို ၁၀ ကြိမ်လောက် စစ်ရတော့ ယာဉ်မောင်းတွေက သိပ်မစစ်ချင်ကြ ဘူး။ ”
ဦးအောင်မိုးက “ကုန်ကျစရိတ်တော့ သက်သာသွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ၇၂ နာရီကို တခါ စစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဒရိုင်ဘာတွေက သိပ်ပြီး မစစ်ချင်ကြဘူး။ သူတို့ကို စစ်ပြီးတော့ ၇၂ နာရီဆိုတော့ ၃ ရက်တခါ စစ်နေရတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်တယ်။ အဝေးသွားတဲ့ သူတွေကျတော့ တလကို ၁၀ ကြိမ်လောက် စစ်ရတော့ ယာဉ်မောင်းတွေက သိပ်မစစ်ချင်ကြ ဘူး။ ဆေးစစ်ဖို့ နေရာတွေကလည်း အခက်အခဲ တွေ ရှိနေတယ်”ဟု ပြောပြသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက “နေရာဒေသအနံှ့အပြားမှာ ဆေးစစ်တဲ့ နေရာ များများရှိဖို့ လိုတယ်။ ဥပမာ နယ်ဒေသတွေကို ရန်ကုန်မြို့က ကားအစီးရေ ၁၅၀၀ နဲ့ ၂၀၀၀ လောက် ထွက်နေတဲ့ အနေအထားမှာ စစ်တာက တနေ့ကို လူ ၅၀၀ လောက်ပဲ စစ်နိုင်တယ်။ ထွက်တာက တနေ့ကို လူ ၃၀၀၀ လောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့နော်”ဟု လက်ရှိ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ၏ အခြေအနေကို ရှင်းပြသည်။
ကုန်တင်ယာဉ်များ ဝင်/ထွက်မည့် နေရာအလိုက် ကိုဗစ်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ကျန်းမာရေး ဆေးစစ်မည့်နေရာများကို အစိုးရအနေနှင့် များများ စီစဉ် ထားပေးနိုင်လျှင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ပို၍ မြန်ဆန်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း၌ မင်းဓမ္မ MCC ခန်းမ ကိုဗစ်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းကို စစ်ဆေးပေးနေပြီး လာမည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း အမြန်လမ်းထိပ်တွင် စစ်ပေးနိုင်ရန် တိုင်းအစိုးရက ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း အသင်းက သိရသည်။
ဦးအောင်မိုးက “ဒါကလည်း ရှိသမျှ လာသမျှကား အကုန်စစ်မယ်ဆိုရင် ကားပိတ်တာတွေကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အနေအထားရှိတယ်။ မနိုင်မနင်းနဲ့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တနေ့ကို လူ ငါးရာ နဲ့ ပိုပြီး မစစ်နိုင်ဘူး။ MCC နဲ့ နှစ်ခုပေါင်း မှ လူ ၁ ထောင်လောက်ပဲ စစ်နိုင်မှာ တကယ့်တကယ် သွားမယ့် အနေအထားက တရက်ကို ကားအစီး ၁၅၀၀ ဆိုရင် လူသုံးထောင်လောက် ဖြစ်နေတယ်” ဟု ထောက်ပြသည်။
ထိုအခြေအနေများကြောင့် လက်ရှိတွင် Supply နှင့် Demand မမျှတတော့ဘဲ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း များတွင် အခက်အခဲများ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်စည်ပြတ်လပ်ခြင်းနှင့် ယခင်ထက် ဈေးအဆမတန် မြင့်တက်ခြင်း မဖြစ်နိုင်သော်လည်း အချိန်ကြန့်ကြာမှုများကြောင့် တချို့ကုန်စည်များတွင်တော့ ဈေးနှုန်း အနည်းငယ် တက်ခြင်း ရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မီးဖိုချောင် စားသောက်ကုန်များဖြစ်သော ကြက်သွန်၊ အာလူး၊ ငရုတ်သီး၊ ဂေါ်ဘီ၊ ပန်းဂေါ်ဘီအစရှိသည့် ကုန်ဈေးနှူန်းများ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်အထိ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အခု နောက်ပိုင်း ရက်များတွင် ဈေးတန်းသွားကာ ကုန်ကားများလည်း ဆင်းလာနေသည်ဟု ကုန်သည်များက ဆိုသည်။
သို့သော်ကုန်ကားခ ဈေးနှုန်းများအနေနှင့် တနေရာနှင့် တနေရာ မြန်မြန် သယ်ယူပို့ဆောင်လိုသော ကုန်စည်များ တင်ဆောင်သည့် အခြေအနေရှိခြင်း၊ ကုန်ကား အငှားရ ခက်ခြင်း တို့ကြောင့် ကားခ ဈေးနှုန်းအနေနှင့် ယခုအချိန်တွင် ဈေးတက်မှုများ ရှိနေသည်ဟု ဦးမောင်မောင်က ပြောသည်။
ဦးမောင်မောင် က “အခုကတော့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်တာ နေရာအနှံ့ပဲ ပထမ ရခိုင်မှာ ဖြစ်တော့ အစီး ၂၀၀ သွားနေတာကနေ ၅၀ လောက်ပဲ သွားနိုင်တယ်။ အခုတော့ ပုံမှန်လေးပဲရှိတယ်။ မန္တလေးတို့ ဘာတို့လည်း ပိတ်မိနေတာပေါ့။ အခု ထိုင်းဘက် ကရော၊ မူဆယ်ဘက်ကရော ပိတ်တယ်ဆိုရင် ကားလျှော့သွားတာပေါ့။ အဲဒါတွေ အခု ဆင်းမရဘူး” ဟု ပြောသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန အနေနှင့် ကားအစီးရေ ၁ ထောင်ခန့်တွင် အစီးရေ ၃၀ ခန့်သာ ဆေးစစ်ပေးနိုင်ခြင်းကလည်း အဆင် မပြေကြောင်း၊ ဒုတိယ တချက်မှာ ယာဉ်လုပ်သားများ အနေနှင့် အမြဲတမ်းနှာခေါင်း အထိုးခံရခြင်းက နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်းများ ဖြစ်လာခြင်းတို့ကြောင့် အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်နေသည်ဟု ကုန်ကားပိုင်ရှင်များ ထံက သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး (stay At home) ကာလအတွင်း ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ချောမွေ့စေရေးနှင့် ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုထားသော လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ လည်ပတ် နိုင်ငံရေးတို့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း နှင့် မြန်မာ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရာတွင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၌ ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်နောက်လိုက်များ ထုတ်ပေးမည့် COVID-19 ကင်းရှင်းကြောင်း Certificate သက်တမ်းကာလအား ၇၂ နာရီသတ်မှတ်ခြင်း အစား ရန်ကုန် အဝင်နှင့် အထွက် ဂိတ်များတွင်သာ စစ်မည်ဟု ညွှန်ကြားထားကြောင်း အစည်းဝေးတွက် တက်ရောက်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI)တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ဦး အေးထွန်းက ပြောသည်။
လမ်းခုလတ်တွင် ထပ်မံ စစ်ဆေးခြင်း မပြုရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း လက်ရှိတွင် Test Kits စစ်ခကို သာ ကျပ် ၁ သောင်းအထိ လျှော့ချကြောင်း ကြေညာထားသော်လည်း ဆေးစစ်ရမည့် ကန့်သတ်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိပေ။
]]> ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် ကုန်စည် စီးဆင်းမှုနှေး၍ စားသောက်ကုန်အချို့ ဈေးတက် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/09/231292.html Fri, 09 Oct 2020 01:30:57 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231292
တနင်္သာရီတိုင်းက ရေထွက်များကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကြည့်မြင်တိုင်ငါးဈေးနှင့် ရွေပိတောက် ငါးဈေးများသို့ တင်ပို့ ရောင်းချရာ တွင် လက်ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများအပြင် ငါးဈေးကွက် ပျက်နေခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ရေလုပ်ငန်း ရှင်များ အခက်တွေ့နေ
The post ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် ကုန်စည် စီးဆင်းမှုနှေး၍ စားသောက်ကုန်အချို့ ဈေးတက် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> နိုင်ငံ့ စီးပွားရေး မူဝါဒ ခရီးရောက်ခဲ့ရဲ့လား https://burma.irrawaddy.com/article/2020/10/09/231257.html Fri, 09 Oct 2020 00:30:47 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231257
လက်ရှိ ပြည်သူအားလုံးအတွက် စီးပွားရေးသည် မရေရာ မသေချာ ဖြစ်နေသောကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများအနေနှင့် တိကျခိုင်မာသည့် ကိုဗစ်အလွန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စီးပွားရေး မူဝါဒများကို ချမှတ်ထားသင့်
The post နိုင်ငံ့ စီးပွားရေး မူဝါဒ ခရီးရောက်ခဲ့ရဲ့လား appeared first on ဧရာဝတီ.
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ သက် တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မည့်အချိန်မှာ နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်သည်။
NLD အစိုးရအနေနဲ့ စတက်လာသည့် အချိန်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံတွင်း ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် နေရ သည့် အတွက် စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ဦးစားပေးနိုင်မှု အားနည်းခဲ့ရသည်။
NLD အစိုးရတက်ပြီး သုံးလခန့်အကြာ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် စီးပွားရေး မူဝါဒ ၁၂ ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ စီးပွားရေး မူဝါဒကို စီမံ/ဘဏ္ဍာ ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးကျော်ဝင်း ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မူဝါဒကို အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များဘက်ညီမျှတစွာ တိုးတက်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှုကို အားပေးရေး စသည့် အချက်များပေါ် အခြေခံကာ ရေးဆွဲထားသည်။
မူဝါဒ တခုချင်းစီကို အသေးစိတ် ကြည့်ရလျှင် အစိုးရ အသုံးစရိတ် စနစ်တကျ ဖြစ်စေရန်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိခြင်းမှ တဆင့် ငွေကြေး အရင်းအမြစ်များ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း ယေဘူယျဆန်သော ကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပညာရှင်များ၏ ဝေဖန်မှုများလည်း ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
NLD အစိုးရသည် ပါတီ၏ စီးပွားရေး မူဝါဒ လမ်းစဉ်ပေါ်သို့ အပြည့်အဝ တာဝန်ခံထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ အချိန်အတော်ကြာ မှသာ စီးပွားရေး မူဝါဒ ၁၂ ချက် အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခြင်းလည်း ဖြစ်ပေသည်။
ထိုစီးပွားရေး မူဝါဒအပေါ်လည်း ပြည်တွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပညာရှင်များ အားရကျေနပ်မှု မရှိခဲ့ပေ။
NLD အစိုးရ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍ ဖော်ဆောင်နိုင်မှုများ
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် တက်လာသော NLD အစိုးရအနေဖြင့် စီးပွားရေး မူဝါဒ ၁၂ ချက်တွင် လမ်းများ၊ တံတားများ တည် ဆောက်ခြင်း၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်ဝင်ရောက်ရေး၊ ကုန်သွယ် ရေးကဏ္ဍနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍများတွင် သိသာသော အကောင်အထည်ဖော်မှု ရှိခဲ့သည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်တွင် ၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၆၄၄ ဒသမ ၄၆၀ သန်း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၁၄၁၉ ဒသမ ၄၆၇ သန်း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၄၁၀၇ ဒသမ ၀၅၅ သန်း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၈၀၁၀ ဒသမ ၅၃၃ သန်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၉၄၈၆ ဒသမ ၁၂၃ သန်း ဝင် ရောက်ခဲ့သည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု ကော်မရှင်၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။
လက်ရှိ NLD အစိုးရ လက်ထက်တွင်၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၆၄၉ ဒသမ ၈၁၂ သန်း ရရှိခဲ့ သဖြင့် ဦးသိန်း စိန် အစိုးရသက်တမ်း နောက်ဆုံးနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဒေါ်လာ သန်း ၂၈၀ ကျော် လျော့ကျခဲ့သည်။
သို့သော် နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တက်လာကာ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်အထိ ကန် ဒေါ်လာ ၅၁၅၇ ဒသမ ၇၈၇ သန်း ဝင်ရောက်ထားကြောင်း သိရသည်။
NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် နိုင်ငံ၏ အဓိက မောင်းနှင်အားဖြစ်သော စီးပွား/ကူးသန်း ဝန်ကြီးဌာနကို ဒေါက်တာ သန်းမြင့် က ပို့ကုန်သုံးဆ တိုးမြှင့်ရေး အိမ်မက်နှင့် တက်လှမ်းလာသည်။
ထို့ကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍကို လေ့လာကြည့်လျှင် NLD အစိုးရ၏ သက်တမ်း ပထမ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ကျဆင်းခဲ့သော် လည်း နောက်ပိုင်း တိုးတက်မှုများ ရှိလာသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏကြီးမားသည့် စက်မှုဇုန် စီမံကိန်းများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများနှင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆိုလာပါဝါ စီမံကိန်းများကိုလည်း NLD အစိုးရ သက်တမ်းတွင် စတင်ခဲ့သည်။
ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့် ယခုလို ကာလမှာပင် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်မှု လွယ်ကူစေရန် ခွင့်ပြုပေးခြင်း နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း စသည့်တို့ကို အစိုးရက ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ခြင်းများ ရှိလာနေ သည်က အစိုးက စီးပွားရေးအပေါ် အာရုံထားလာသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ဦးသိန်းစိန် လက်ထက် အစိုးရ စတင်သည့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကုန် သွယ်မှု ဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံနှင့် စတင်ခဲ့ကာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ ဒေါ်လာ ၂၇ ဘီလီယံ ကျော်အထိ ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင် တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုများ ကြီးစိုးခဲ့သောကြောင့် Mobile Team အဖွဲ့ ဖွဲ့ကာ မှောင်ခို ကုန်သွယ်မှုများကို တားဆီး ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထိုအိပ်မက်နှင့် စတင်သည့် အစိုးရသစ်၏ ပထမနှစ်က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဒေါ်လာ ၃၃ ဘီလီယံကျော် ကုန် သွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ဇွန်လအထိ ဒေါ်လာ ၃၄ ဒသမ ၃၅၃ ဘီလီယံ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သော ကြောင့် ကုန်သွယ်မှုတွင် တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးခင်မောင်လွင်က “ကိုဗစ်ကြောင့် ထိခိုက်တာ ရှိပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ကာလတူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ကုန်သွယ်မှုက တိုးတက်လာတယ်။ ပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့ နယ်စပ် ကုန်သွယ် ရေး ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ အရင်နှစ်ကထက် တိုးတက်တယ်။ နှစ်ဆကျော်လောက် တိုးတက်လာတယ်” ဟု ပြောပြသည်။
ကုန်သွယ်ရေးတွင် သစ်သီးဝလံတင်ပို့မှု ကဏ္ဍကလည်း တိုးတက်မှု ရှိလာပြီး ဆန်စပါး ကဏ္ဍတွင်လည်း ဈေးကွက်သစ်များ ရရှိလာခြင်းများ ရှိကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ် ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ထိခိုက်မှု ရှိနေပြီး ကပ်ရောဂါ မဖြစ်လျှင် မြန်မာ့ကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဍသည် ယခုထက် ပို၍ တိုးတက်လာနိုင်သော အလားအလာများ ရှိနေနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောဆိုကြသည်။
ကုန်သွယ်ရေး တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ စီးပွားရေးသံမှူးများ စေလွှတ်ကာ ဈေးကွက်၊ ဝယ်လိုအား၊ တဖက်နိုင်ငံ၏ အခြေအနေများကို စုံစမ်းကာ ပြည်တွင်းရှိ ကုန်သည်၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိနေသည်။
NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် အထူးသဖြင့် လမ်း၊ တံတား၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်သည့် ကိစ္စရပ်များသည် လူထုကြား သိသာသော တိုးတက်မှုတခု ဖြစ်သည်ဟု စီးပွားရေး ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဇော်ဦးက သုံးသပ်ပြောပြသည်။
“စီးပွားရေးမူ ၁၂ ချက်မှာ ပါခဲ့တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကြေညာစာတမ်းမှာလည်း ဒီကိစ္စ အဓိက လုပ်မယ်ဆိုပြီး ပြောထားတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အရင်က ရှိပြီးခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတွေကိုပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်သွားတယ်လို့ ပြော လို့ရတာ တခုတော့ ရှိတာပေါ့” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
NLD အစိုးရ လက်ထက်အတွင်း တံတားအစင်းပေါင်း ၅၂၀ ကျော် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ကျပ် ၈၅၀ ဘီလီယံနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် အစိုးရများက ကျပ် ၃၃၀ ဘီလီယံခန့်ဖြင့် စုစုပေါင်း ကျပ် ၁၁၀၀ ဘီလီယံကျော် အသုံးပြုဆောက်လုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆောက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာနက ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့ပြင် ဆောက်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို တည်ဆောက်နေသော အဆောက်အအုံ ဦးစီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနတို့သည် လာမည့်၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှစတင်ကာ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် မည် မဟုတ်တော့၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းသစ်များကို ပုဂ္ဂလိက တင်ဒါခေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ် ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဖြစ်ပြီး ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကြား ထိစပ်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများကြားတွင် ယခင်က လက်ဖက်ရည်ဖိုးထက်မက ပေးရသည့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ အတော်ပင် လျော့ကျသွားကြောင်း တွေ့ရသည်
ထိုအချက်ကလည်း ပုဂ္ဂလိက ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပို၍ ရရှိလာနိုင်ရန် ငွေကြေး စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
လက်ရှိ NLD အစိုးရသက်တမ်း အတွင်း၌လည်း နိုင်ငံစီးပွားရေး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နေမှုမှာ နိုင်ငံရေးအရ ထိုက် သင့်သည့် အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ကြောင်း ဥပမာအားဖြင့် ကိုဗစ်ကာလတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများ၌ စီးပွားရေး အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်တွင်း အသားတင်ထုတ်ကုန် တန်ဖိုး(GDP)၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်သွားခြင်း မရှိသည့်အပြင် အနည်းငယ် တိုးတက်လာသည်ကိုပင် တွေ့ရကြောင်း NLD ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ မျိုးညွန့်က ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမူဝါဒသည် ရေရှည်အနေဖြင့် အနည်းငယ် အရှိန်ရလာပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ် လောင်း ပြောဆိုသည်။
“စီးပွားရေးမူဝါဒ ၁၂ ချက်အရပဲ ကျနော်တို့ NLD အစိုးရကနေ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (NSDP) ချမှတ်ပြီးတော့ အကောင်အထည် ဖော်နေပါတယ်” ဟုလည်း ဆိုသည်။
NLD အစိုးရ၏ စီးပွားရေး မူဝါဒအပေါ်ဝေဖန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဒေါက်တာ မျိုးညွန့်က “ဝေဖန်တာတော့ သူတို့ အနေနဲ့ သူတို့ ဝေဖန်တာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ မူဝါဒ ချမှတ်တာက အကောင်းဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင် အောင် ကြိုးစားမယ်။ နောက်ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ မကိုက်ညီရင်လည်း မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီးတော့ ဆက်လုပ်သွားမယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုအစိုးရလက်ထက်တွင် လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်သာကိုင်သာ ရှိစေရန်အတွက်လည်း ချေးငွေများ ထုတ်ပေးခြင်း၊ လုပ် ငန်းရှင်များ လုပ်သာကိုင်သာရှိစေရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တချို့နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့ပေးခြင်းတို့လည်း ရှိခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အစိုးရ၏ သိသာထင်ရှားသည့် လုပ်ဆောင်မှု တချက်မှာ အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဖြစ်ပြီး ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကြား ထိစပ်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများကြားတွင် ယခင်က လက်ဖက်ရည်ဖိုးထက်မက ပေးရသည့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ အတော်ပင် လျော့ကျသွားကြောင်း တွေ့ရသည်ဟု စီးပွားရေး ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဇော်ဦးက ပြောသည်။
ဝန်ထမ်းများ၏ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ကိစ္စများကို အစိုးရအနေနှင့် စုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီး ၎င်းတို့ကို စစ်ဆေး အပြစ်ပေး ခြင်းက ပြင်းထန်သောကြောင့် အကျင့်ပျက် ခြစားမှု တော်တော်များများကလည်း အတိုင်းတာတခုအထိ ရောက်ခဲ့ခြင်းက အားရကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေး ပညာရှင်များက တညီတညွတ် သုံးသပ်ထားသည်။
အစိုးရ၏ စီးပွားရေး ဖော်ဆောင်မှုအပေါ် ဝေဖန်ချက်များ
အစိုးရ၏ စီးပွားရေး မူဝါဒ ထွက်ရှိကတည်းက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စီးပွားရေး လေ့လာသုံးသပ်သူများကြား ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမူဝါဒကို အမှန်တကယ်ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်မှု ရှိမရှိကိုလည်း စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုများလည်း ရှိသည်။
စီးပွားရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးဇော်ဖေဝင်းက “မူဝါဒ ၁၂ ချက်ကတော့ ဝါကျ တကြောင်းထဲမှာပဲ အချက်အလက်တွေ တော်တော်များများ ရေးထားတယ်။ ဘယ်ကိစ္စကို ဦးစားပေး လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ဟာမျိုး မပေါ်လွင်ဘူး။ ပြန့်ကျဲနေတယ်” ဟု ထောက်ပြ ပြောဆိုသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် စီးပွားရေး မူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် နေရာတွင်လည်း သက်တမ်း တဝက်ကျော်တွင် ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းကလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းတော်တော်များများကို အဆုံးသတ် စုစည်းရန် အချိန် မရဘဲ ကိုဗစ်ကို တွန်းလှန်ရင်းသာ သက်တမ်း ကုန်သွားရမည့် သဘောမျိုးသာ ရှိသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အဓိကတော့ ဝင်ငွေနဲ့ အလုပ်အကိုင်မှာ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီအစိုးရ သက်တမ်း ငါးနှစ် အတွင်းမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြောင်းလဲမှု မရှိခဲ့ဘူ
ထို့ကြောင့် အစိုးရအနေနှင့် မူဝါဒများကို ချမှတ်ထားသော်လည်း ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
NLD စီးပွားရေး ဗဟိုကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူလည်းဖြစ်၊ စီးပွားရေး ပညာရှင်လည်းဖြစ်သူ ဦးမင်းခင်က လည်း စီးပွားရေး မူဝါဒမှာ ယေဘူယျဆန်နေသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် ထပ်မံရေးဆွဲခဲ့ရပြီး လက်ရှိတွင်လည်း COVID-19 ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက် အစိုးရသည် COVID-19 စီးပွားရေး ထိခိုက်မှု သက်သာရေး စီမံချက် (CERP)ကို ထပ်မံရေးဆွဲရခြင်းကလည်း မူဝါဒများ မတည်မငြိမ် ဖြစ်ခြင်းကို ဖော်ပြနေသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် အစိုးရ၏ စီးပွားရေးမူဝါဒသည် တိကျခိုင်မာရမည် ဖြစ်သော်လည်း တည်ငြိမ်မှု အားနည်းသည်ဟု ထောက်ပြ သည်။
ထို့ပြင် NLD အစိုးရ၏ စီးပွားရေးမူ တခုဖြစ်သည့် အခြေခံ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်လာစေ ရေး အချက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ လမ်း၊ ဆိပ်ကမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ကို ထည့်ထားပြီး ယင်းအချက်အနေနှင့် လမ်းတခုသာ တိုးတက်မှု တွေ့ရပြီး လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင် ပိုမကောင်းလာသည့် အပြင် ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း၊ မီးအား မမှန်ခြင်းတို့ကြောင့် စက်မှုကဏ္ဍအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု စီးပွားရေး ပညာရှင်များက ဆိုထားသေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ဆိပ်ကမ်းဆိုသည့် အချက်ကို ကြည့်လျှင် ကျောက်ဖြူရေနက် ဆိပ်ကမ်း၊ ထားဝယ်ရေနက် ဆိပ်ကမ်း ဆိုသည့် ဆိပ်ကမ်း ၂ ခုနှင့် အထူး စီးပွားရေးဇုန်ကလည်း သက်တမ်း ၅ နှစ်အတွင်း ရေရာသေချာသည့် လုပ်ဆောင်မှုမျိုး မတွေ့ခဲ့ရကြောင်း စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာ ဇော်ဦးက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ခြင်း ပို့ကုန်မြှင့်တင်နိုင်ခြင်းတို့မှာလည်း ဖြစ်လာခြင်း မရှိဘဲ လယ်ယာ၊ သား၊ ငါး ကဏ္ဍတွင် မှီခိုနေ သော တောင်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ အနေနှင့် ယခင်ကထက် မိသားစု ဝင်ငွေ နည်းပါးသွားသည့် အခြေ အနေများ ရှိနေသည်ဟု ထောက်ပြ ပြောဆိုသည်။
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ အနေဖြင့် ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူနိုင်ငံများ သာမက အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံတခု ဖြစ်သော လာအိုနိုင်ငံလိုမျိုးကိုပင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်သားများ တိုးနေခြင်းက ပြည် တွင်း၌ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။
ဒေါက်တာ ဇော်ဦးက “အဓိကတော့ ဝင်ငွေနဲ့ အလုပ်အကိုင်မှာ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီအစိုးရ သက်တမ်း ငါးနှစ် အတွင်းမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြောင်းလဲမှု မရှိခဲ့ဘူး” ဟု ပြောသည်။
NLD အစိုးရ စီးပွားရေး ပေါ်လစီအပေါ် တခြား ပါတီများ၏ အမြင်
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပါတီ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုင်းသီဟကျော် ကလည်း အစိုးရ ချမှတ်ခဲ့သည့် မူဝါဒ ၁၂ ချက်က မြေပြင်တွင် နိုင်ငံ့ စီးပွားရေးကို တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်နိုင်သော သိသာမြင် သာသည့် လုပ်ဆောင်ချက်မျိုး မတွေ့ရကြောင်း ဆိုသည်။
“ဒါပေမယ့် ဗဟိုဘဏ်အပိုင်းမှာတော့ အတော်အတန် ထိန်းကျောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်တာ တွေ့ရတယ်။ ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေးမှာတော့ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးတွေက အစ သိပ်ပြီးတော့ သိသာပြောင်းလဲတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ အတွက် အကျိုးရှိစေ မယ့် ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့ မတွေ့ရဘူး” ဟု ၎င်းက ထောက်ပြသည်။
အထူးသဖြင့် တိုင်းသား ဒေသများရှိ ထွက်ကုန်သီးနှံများကို တဖက်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချသည့် အခါ ပိတ်ပင် တားဆီး ခံရသည့် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အခြေအနေများ ရှိခဲ့သည်။
ထိုကိစ္စကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနသို့ မေးခွန်းများ မေးမြန်း တင်ပြခဲ့သော်လည်း တဖက်နိုင်ငံနှင့် ညှိနှိုင်းပေးမည် ဆိုသော အချက်မှလွဲ၍ လုံလောက်သော အဖြေ မရရှိခဲ့ပေ။
ဆက်လက်၍ ဦးစိုင်းသီဟကျော်က ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကလည်း တုံ့ဆိုင်းသွားသည့် အခြေအနေများ ရှိခဲ့သဖြင့် ယင်းနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်များမှာ ထိခိုက်သွားခြင်းများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း ယခု အစိုးရသက်တမ်း ကာလအတွင်း အား နည်းခဲ့သည့် အချက်များကို သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ယင်းပြင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ကိစ္စရပ်များကလည်း နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ် များစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိနေသကဲ့သို့ ကပ်ရောဂါဆိုး၏ အန္တရာယ်ကလည်း အစိုးရ ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွ့ွံဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေးမှုများ ဖြစ်စေသည်။
NLD အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အားမရသည့် နိုင်ငံရေး ပါတီတချို့ကမူ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး မူဝါဒများကို ပြင်ဆင်နေသည်များလည်း ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှိလာသည်။
NLD မှ ဒေါက်တာ မျိုးညွန့်ကလည်း အစိုးရစတက်ခါစနှစ်များတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်သော အစိုးရအဖွဲ့ကို လူထုအနေဖြင့် အားမလို အားမရ ဖြစ်ခဲ့သည်ကို နားလည်ကြောင်းလည်း ဝန်ခံ ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ တည်ရှိနေတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရတဲ့ အတွက် အချိန်လေး အနည်းငယ် ယူနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားက ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ပိုပြီးတော့ လိုက်လျောညီထွေ ရှိလာတာနဲ့ အများပြည်သူများ မြင်တွေ့နိုင်ပြီလို့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခု NLD အစိုးရ လက်ကျန် သက်တမ်းအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျန်ရှိသည့် စီမံကိန်းများကိုလည်း Project bank အတွင်း ထည့်သွင်းထားပြီး နိုင်ငံ့ဝင်ငွေ ရရှိမူအပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်သွားရန် ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
“ဒါက ရေရှည်မှာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အကုန်အကျ သက်သာစေပြီး ထိရောက်မှု ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံ အတွက် လိုအပ်တဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ဖော်ဆောင်ပြီးတော့ အခု အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ရင်တောင် Project bank ထဲ ထားပြီးတော့ နိုင်ငံအတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ငွေကြေး ရရှိလာမှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆို သည်။
NLD ပါတီ၏ ၂၀၁၅ ကြေညာစာတမ်းတွင် အခွန်ကောက်ခံရေး၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရနှင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ များ ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ခွဲဝေလုပ်ကိုင်ရေး ကိစ္စများ ပါဝင်သော ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာရေး ပါရှိပြီး ပြည်သူများက လိုလား စွာ ထမ်းဆောင်လိုစိတ် ရှိစေသည့် အခွန်စနစ်မျိုး ပေါ်ပေါက်ရန် တွန်းအားပေးမည် ဟု ဆိုထားသည်။
လယ်ယာကဏ္ဍ တိုးတက်ရေး၊ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်များသို့ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်ရေး တို့မှာမူ ၂၀၁၅ စီးပွားရေး စာမျက်နှာကဲ့သို့ ၂၀၂၀ တွင်လည်း ပါဝင်သည်။
လက်ရှိ အစိုးရလက်ထက်တွင် စီးပွားရေး ကဏ္ဍသည် ကျဆင်းသည့်အပြင် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် ပိုဆိုးသွားသည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်ဟု ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP)မှ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဒေါက်တာ နန္ဒာလှမြင့်က ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ ပါတီအနေနှင့် ၂၀၂၀ အလွန်တွင် စီးပွားရေးကဏ္ဍအလိုက် ပြန်လည် ဦးမော့လာစေရန် မူဝါဒကို သက် ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ ရှိသော ဝန်ကြီးဟောင်းများ၊ ပညာရှင်များ ပါဝင်ကာ ကုန်သွယ်မှု ကဏ္ဍ၊ ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍ၊ ဝန် ဆောင်မှုကဏ္ဍ အစရှိသဖြင့် ကဏ္ဍအလိုက် ဖော်ဆောင် ရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့မှာ Plan ရှိပါတယ်။ ပထမ ၁ နှစ်မှာ ဘာလုပ်မယ် ဒုတိယ တနှစ်မှာ ဘယ်ကဏ္ဍတွေကို ဘယ်လိုလုပ်မယ်။ တတိယနှစ်မှာ ဘယ်လို လုပ်မယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့မှာ စီမံထားတာ ရှိတယ်” ဟု ဒေါက်တာ နန္ဒာလှမြင့်က ထပ်လောင်း ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိ ပြည်သူတွေ ကြုံတွေ့နေရသည့် စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးမှု၊ အခွန်တိုးမြင့်မှု စသည့် ကဏ္ဍများ အပါအဝင် စီးပွားရေး မူဝါဒကို သေချာ ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလည်း ဆိုထားသည်။
နိုင်ငံရေး ပါတီပေါင်း ၉၀ ကျော် ရှိသည့် အနက် အစိုးရ ဖွဲ့နိုင်သော ပါတီမှာ လက်ချိုးရေ၍ ရကြောင်း၊ အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည့် ပါတီမှသာလျှင် တိုင်းပြည် စီးပွားရေး ဦးမော့လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီများအနေဖြင့် ခိုင်မာသော စီးပွားရေး မူဝါဒများ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရန် သင့်နေပြီလည်း ဖြစ်သည်။
SNLD ပါတီ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုင်းသီဟကျော် “လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်လို စီးပွားရေး မူဝါဒတွေ ချမှတ် ဆောင်ရွက်မလဲ ဆိုတာကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ပါတီ အလိုက်ကတော့ သူ့ဟာနဲ့သူ မူဝါဒတွေ ရှိကြမှာပါ။ ဗဟို အစိုး ရ ဖွဲ့နိုင်လောက်တဲ့ ပါတီတွေအနေနဲ့ စီးပွားရေး မူဝါဒတွေ ကြိုတင် သုံးသပ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ လက်တွေ့နဲ့လည်း ကိုက် မယ်၊ နိုင်ငံတကာ မူဝါဒနဲ့လည်း ကိုက်မယ့်ဟာတွေချဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အထက်ပါ အခြေအနေများကြောင့် ယခု၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသည့် ပါတီမှ တက်မည့် အစိုးရအဖွဲ့က ချမည့် စီးပွားရေးမူဝါဒများသည် ကိုဗစ်ကာလအလွန်ကို ထည့်သွင်း သုံးသပ်ပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်ပြော ပြ သည်။
စီးပွားရေး ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဇော်ဦးက “ပါတီတွေ အနေနဲ့ လူထု လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ကိစ္စက ဘာလဲဆိုတာ အဖြေ ပေးဖို့ လိုတယ်။ ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နေရာတိုင်းက လူတွေ ခံစားနေရတယ်။ ဒါတွေ ပါဖို့လိုတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ကိုဗစ်ကာလ မြန်မာ့စီးပွားရေး အခြေအနေ
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီက ထုတ်ပြန်ထားသည့် အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသော်လည်း နောက်ဆုံးဇွန်လက ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကပ်ရောဂါသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးကို ပြင်းထန်စွာ ထိုးနှက်လိုက်ပြီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်း မြန်မာ့စီးပွားရေးသည် ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်း သွားမည်ဟု အစီရင်ခံစာက ခန့်မှန်းထားသည်။
ကပ်ရောဂါ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျူံ့သွားနိုင်ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်မှသာ ပြန်လည် နလန်ထူနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသော်လည်း ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်ဦးမည် မဟုတ် ပေ။
ယင်းအစီရင်ခံစာက မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သော ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံငွေ ထူထောင်ခြင်းနှင့် ကိုဗစ် ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော စီးပွားရေး ကုစားမှု စီမံချက် (CERP) အား လေ့လာ သုံးသပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ပတွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူများကလည်း ယခုအချိန်တွင် အလုပ်ပြုတ်၍ ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လာသည့် လုပ်သားများ မှာလည်း များစွာ ရှိနေသည်။
CERP တွင် အခွန်သက်သာခွင့်ပေးခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများအတွက် အစား အစာနှင့် ငွေသားများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေမည့် မူဝါဒများနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ကုစားပေးရန် အချက်များ ပါဝင်နေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်ကောင်းများ ချမှတ်နိုင်ရန်နှင့် စီးပွားရေး ဆောင်ရွက်ချက် ကောင်းများ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အတွက် အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များမှာ ပဋိပက္ခများအား အဆုံးသတ်ရန်၊ လူမှုပါဝင်မှု (Social inclusion) အားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ တာဝန်ယူမှု ရှိသည့် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးကဏ္ဍ တရပ် ဖြစ်ထွန်းလာအောင် အားပေး လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အစိုးရကို တိုက်တွန်း ထားသည်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသက်တမ်း နောက်ဆုံးနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ ပြီး ဝန်ဆောင်မှု၊ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍများ ထွန်းကားလာသောကြောင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု၏ အဓိက မောင်းနှင်အားဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထို့ပြင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း အနေဖြင့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းမှာ လည်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထား သည်။
ယခု ကာလသည် ကိုဗစ်ကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုတွင် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုများ ရှိနေသည့် အတွက် အသစ်ထွက်ပေါ်လာ မည့် အစိုးရ အနေဖြင့် တိကျ ခိုင်မာသည့် ကိုဗစ်အလွန် စီးပွားရေး ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကို လုပ်ဆောင်မည့် မူဝါဒများ နှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အစိုးရကို ပြည်သူများက မျှော်လင့်နေသည်။
လက်ရှိတွင် ကိုဗစ်ကြောင့် လက်ခစား (CMP) လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် စက်ရုံ အလုပ်ရုံပေါင်း ၅ ထောင်ကျော် ပိတ်သိမ်း ကာ၊ တရားဝင် စာရင်းအရ အလုပ်လက်မဲ့၂ သိန်းကျော် ရှိနေပြီး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ထုတ် လုပ်မှု အပေါ် မှီခိုနေသောသူများ၊ အစိုးရထံသို့ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိသည့် လုပ်ငန်း အသေးစား၊ အလတ်စားများ၊ အိမ် ဆိုင်များစွာ ပိတ်သိမ်း၍ အလုပ်လက်မဲ့များ၊ ဝင်ငွေ လျော့ကျမှုများ ရှိနေသည်။
အစိုးရ သက်တမ်းကုန်ခါနီးအချိန်ထိ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် အားကောင်းမောင်းသန် အရွေ့မပြနိုင်ခဲ့
ပြည်သူအားလုံးအတွက် စီးပွားရေးသည် မရေရာ မသေချာ ဖြစ်နေသောကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများအနေဖြင့် တိကျခိုင်မာသည့် ကိုဗစ်အလွန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စီးပွားရေး မူဝါဒများကို ချမှတ်ထား သင့်သည်ဟု စီးပွားရေး ပညာရှင်များက သုံးသပ်ထားကြသည်။
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်ဦးက “ကျနော် တို့ကတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို ကိုယ့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသကဲ့သို့ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလား၊ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေ ရှိလား ဆိုတာ လက်ပွန်းတတီးနဲ့ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အစိုးရမျိုးကို မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
နောက်တက်လာမည့် အစိုးအနေဖြင့် လက်ရှိ ရှိပြီးသား မူဝါဒကို ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်မည့်အစား NLD အစိုးရ စီးပွားရေး မူဝါဒ၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို လေ့လာသုံးသပ်၍ မူဝါဒအသစ် ချမှတ်ပြီး တိကျသော ဦးစားပေး ကဏ္ဍများနှင့် လုပ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်းလည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ၏ စီးပွားရေး ကတိကဝတ်
လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း၏ စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး ကဏ္ဍကို အားပေးခြင်းနှင့် အသေးစားအငယ်စား၊ အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အားပေးမြှင့်တင်ရေး၊ ယခင် စာတမ်းတွင် ပါဝင်သည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးနိုင်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမို ဝင်ရောက်နိုင်ရေးတို့ အပြင်၊ COVID 19 ကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်မှုများကို လျော့ပါးသက်သာစေရေးနှင့် နိုင်ငံစီးပွားရေး ပြန်လည် ဦးမော့လာ စေရေး စသည့်အချက်များလည်း ပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထို့ပြင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အများစု ပြောဆိုကြသကဲ့သို့ ဈေးကွက်တခုတည်းကို မူတည်မည့်အစား အခြားနိုင်ငံများသို့ ဈေးကွက် ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ရေး။ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေး စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံ စီးပွားရေး တိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်ပြီး အခြား နိုင်ငံများသို့ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးကိုလည်း ဦးစားပေးထားသည်။
လက်ရှိ NLD အစိုးရအနေဖြင့် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးထက် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ ပြည်တွင်း SME လုပ်ငန်းများ မပြိုကျစေရေးအတွက် ဝန်ထမ်းအနည်းအများ အပေါ်မူတည်ကာ ချေးငွေများ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဝင်ငွေလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို အထောက်အပံ့ရရှိစေရန်အတွက် အစိုးရ ဝန်ထမ်းများကို ကြိုတင်လစာများ ထုတ်ချေးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစား ပြည်သူများကို အခြေခံ စားသောက်ကုန်/ငွေကြေးများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း တို့ဖြင့် ကျားကန်ပေးလျက်ရှိနေသည်။
အစိုးရ သက်တမ်းကုန်ခါနီးအချိန်ထိ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် အားကောင်းမောင်းသန် အရွေ့မပြနိုင်ခဲ့သော်လည်း နောက် တက်လာမည့် အစိုးသစ်အနေဖြင့် လက်ရှိ ဖော်ဆောင်လက်စများကို ဆုပ်ကိုင်၍ ဆက်လက် ရွေ့မည်ဆိုပါက မြန်မာ့ စီးပွားရေးအတွက် အရှိန်အဟုန် တက်လာစေနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။ ။
]]> စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ရပ်ထားရ၍ မှာယူသူများမှ နိုင်ငံပြောင်းရွှေ့အပ်နှံမှု ရှိလာ ဟုဆို https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/07/231213.html Wed, 07 Oct 2020 14:06:47 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231213
Stay at Home ညွှန်ကြားချက်၂ ပတ် ထပ်တိုးသဖြင့် လက်ခစားစနစ်(CMP)ဖြင့် လုပ်ကိုင် နေရသော မြန်မာ့စက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၏ ကုန်အမှာစာများအား တခြားနိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားမှုများ ရှိလာ
The post စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ရပ်ထားရ၍ မှာယူသူများမှ နိုင်ငံပြောင်းရွှေ့အပ်နှံမှု ရှိလာ ဟုဆို appeared first on ဧရာဝတီ.
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း Stay at Home ညွှန်ကြားချက်မှာ ရက်သတ္တ ၂ ပတ် ထပ်တိုးသဖြင့် လက်ခစားစနစ် (CMP)ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေရသော မြန်မာ့စက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၏ ကုန်အမှာစာများအား တခြားနိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်း သွားမှုများ ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အောင်သိန်းက “ပထမ ၂ ပတ်ပိတ်တုန်းကတော့ Buyer တွေက နားလည်ပေးတယ်။ ဒီအခြေအနေအရ သည်းခံပြီး စောင့်ပေးတယ်။ အခု နောက်၂ ပတ် တိုးလိုက်တဲ့ အပေါ် သူတို့က ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် သူတို့အပ်ထားတဲ့ အလုပ်တွေက အော်ဒါရှိပြီးသားက ရာသီချိန်နဲ့ ကိုက်ပြီး လုပ်ရတာကြောင့် အခြားနိုင်ငံတွေကို ရွှေ့သွား တာပေါ့။ ဒါက CMP ကဏ္ဍပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “လက်ခံထားပြီးသား အမှာစာတွေတောင်မှ တချို့ Order Cancel ဖြစ်သွားတယ်။ အချိန်မီ ဆက် မထုတ်နိုင်တော့တဲ့ အတွက် အပ်ထားတဲ့ Buyer တွေက တခြားဖွင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို အထူးသဖြင့် ဗီယမ်နမ်ဘက်ကို ပြောင်းပို့ခိုင်းတဲ့အတွက် အော်ဒါတွေ ဆုံးရှုံးတယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။
စက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် ရရှိပြီးသား ကုန်ကြမ်းများကို ဈေးကွက်ရွေ့ပြောင်းမှုကြောင့် တခြား နိုင်ငံသို့ ကုန်ကြမ်းများ ပြန်လည် ရွှေ့ပြောင်းပေးရသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ရှိပြီး သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း မထုတ် လုပ်ပေးနိုင်သောကြောင့်လည်း စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်အရ ပေးလျော်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ Buyer များ၏ ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးသွားပြီး နောက်ပိုင်း အမှာစာများ ထပ်မရမည်ကို စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေ ဖြစ်နေကြောင်း ဒေါက်တာ အောင် သိန်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းတွင် ရောဂါကူးစက်မှု အရှိန်အဟုန်နှင့်တက်လာသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားက စားဝန်ကြီးဌာနက စက်တင်ဘာလ၂၀ ရက် ညတွင် ၁ ကြိမ်၊ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက် ညတွင် တကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တခုလုံး (ကိုကိုးကျွန်းမပါ)ကို Stay at Home အိမ်တွင်သာ နေရန် ညွှန်ကြားချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ခွင့်ပြုထားသည့် ငွေကြး ဝန်ဆောင်မှု၊ အစားအသောက်၊ ပြည်သူ့ ဝန်ဆောင် မှုနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမှအပ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများ အားလုံး အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်အထိ နေအိမ်မှသာ လုပ်ကိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် CMP စက်ရုံများ အနေဖြင့်လည်း ယခု အောက်တိုဘာလ ၅ ရက် ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ၂ ပတ် ဆက်လက် ပိတ်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
CMP လုပ်ငန်းများ မဟုတ်သော အခြားသော ဖွင့်လှစ်ခွင့်မရှိသော အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မူကုန်ထုတ် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များတွင်လည်း လုပ်ငန်းများလည်ပတ်မှု မရှိ၊ ဝင်ငွေမရှိ ရပ်တန့်ထားရသဖြင့် ဆက်လက် ရပ်တည်ရန် အကျပ် အတည်း အခက်အခဲများလည်း ရှိနေကြောင်းလည်း ဒေါက်တာ အောင်သိန်းက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှအပ ကျန် CMP လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း အပိုပစ္စည်း လုပ်ငန်း၊ အိတ်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ဖိနပ်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ်လုပ်ငန်း၊ ဖိုက်ဘာ နှင့် အသက်ကယ် သင်္ဘောလုပ်ငန်း၊ မီးဖိုချောင်သုံး ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ ဆံပင်အတု လုပ်ငန်း၊ မှန်ဘီလူးနှင့် ကင်မရာ လုပ် ငန်း၊ စက်မှုပစ္စည်း လုပ်ငန်း အစရှိသည်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အသင်းဖြစ်သည်။
ထိုအသင်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ကုန်ကြမ်းများ တင်သွင်းခြင်း၊ ကုန်ချောများ တင်ပို့ခြင်း၊ တင်သွင်းလာသည့် ကုန်ကြမ်း များမှာ Order Cancel ဖြစ်သွားခြင်းကြောင့် ပြန်လည် တင်ပို့ခြင်း (Re- export) လုပ်ခွင့်၊ ခွင့်ပြု ထောက်ခံချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးရသည်။
လက်ရှိတွင် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနည်းတူ ပြည်တွင်း အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းများမှာလည်း အခက်အခဲများ ကြုံနေ ရကြောင်း သိရ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်မျိုးဟိန်းက “စစခြင်းထဲက ကျနော်တို့ကို ၁ လလောက် ပိတ်မယ်လို့ ပြောထားရင် Buyer တွေနဲ့ တကြိမ်ပဲ ညှိရမယ်လေ။ အခုက ကြေညာချက်ကို တရက်နှစ်ရက် ကြိုတော့မှ လုပ်တယ် ဆိုတော့ Buyer ရဲ့ Customer တွေလည်း တော်တော်ဒုက္ခ ရောက်သွားတယ်။ ကျနော်တို့က Customer နဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့တာ မဟုတ်ဘူး။ တဆင့်ခံ အေးဂျင့်တွေက သွားတာ။ အဲဒီတော့ တော်တော်ပြောရခက် သွားတယ်” ဟု လုပ်ငန်း၏ အခြေအနေကို ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တခြားနိုင်ငံရှိ စက်ရုံများကဖွင့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်ရုံများ မဖွင့်လျှင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာ ရာသီအလိုက် ချုပ်ထည်များ ချုပ်လုပ်ရသည့် ဈေးကွက် ဖြစ်သောကြောင့် အချိန်မီ မရလျှင် တခြားဈေးကွက်သို့ လုပ်ငန်းများ ရွှေ့သွားပြီး စက်ရုံများ ပိတ်သိမ်းသည်အထိ ရှိလာနိုင်ကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
လတ်တလော၂ ပတ် ထပ်တိုး ပိတ်လိုက်သောကြောင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ ရေရှည်တွင် SME လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းကြီး၊ ငယ်၊ အလတ်များ ရှင်သန်နိုင်မည့် အချက်များ စသည်တို့ကို စုစည်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များ နှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) က ဦးဆောင်၍ တိုင်းအစိုးရထံသို့ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် တွင် တင်ပြထားကြောင်း UMFCCI အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးအေးဝင်းက ပြောသည်။
ထို့ပြင် အလုပ်သမားများအတွက် လုပ်ခလစာနှင့် ပတ်သက်၍ ဖွင့်လှစ်ခွင့် မပြုထားသော လုပ်ငန်းများမှ အလုပ်သမားများ၊ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် စက်တင်ဘာ လုပ်ခလစာကို သက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှစ၍ သွားရောက် ထုတ်ယူရန် ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း UMFCCI က ယနေ့ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထည်ချုပ် စက်ရုံပေါင်း ၆၀၆ ရုံ ရှိကာ အထည်ချုပ် လုပ်သား ၆ သိန်း နီးပါးပြီး ကျန် CMP လုပ်ငန်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိကာ လုပ်သား အင်အား အကြမ်းဖျင်း ၃ သိန်းနီးပါး ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကိုဗစ်ရောဂါသည် ရေရှည် စဉ်းစားရမည့်ကိစ္စရပ် ဖြစ်နေသောကြောင့် အားလုံးဝိုင်းဝန်းစဉ်းစား၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောာ နည်းလမ်းများဖြင့် ပြည်တွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုလိုမျိုး ၂ ပတ်စီ ထပ် တိုးပိတ်နေခြင်းသည် အဖြေမဟုတ်ကြောင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောဆိုသည်။